Shuruudaha Adeegga | Zeevou
Shuruudaha Adeegga ee Zeevou
Shuruudaha Adeeggan waxaa loogu talagalay in lagu sharxo waajibaadka naga saaran adeeg bixiye iyo waajibaadkaaga macmiil ahaan.
Ku soo dhowow Zeevou, xisaabinta khadka tooska ah iyo adeegga maareynta maaliyadda shaqsiyadeed ee loogu talagalay gaar ahaan ganacsiyada yaryar. Shuruudaha Adeeggan waxaa loogu talagalay in lagu sharxo waajibaadka naga saaran adeeg bixiye iyo waajibaadkaaga macmiil ahaan. Fadlan u akhri si taxaddar leh.
Shuruudahaan waxay ku xiran yihiin adeegsi kasta oo Adeegga ah waxayna ku khuseeyaan adiga laga bilaabo wakhtiga ay Zeevou ku siiso inaad marin u hesho Adeegga.
Adeeggu wuu isbeddeli doonaa wakhti ka dib iyada oo ku saleysan jawaab celinta isticmaalaha. Shuruudahaan looma jeedin inay ka jawaabaan su'aal kasta ama wax ka qabtaan arrin kasta oo ka timaadda adeegsiga. Zeevou waxay xaq u leedahay inay bedesho ereyadan wakhti kasta, oo dhaqan gal ah marka la soo diro shuruudaha wax laga badalay Zeevou waxay sameyn doontaa dadaal kasta oo ay kugula soo xiriireyso isbedeladaan adiga adiga oo ku soo diraya emayl ama ogeysiin websaydhka ah. Waxay u badan tahay in Shuruudaha Adeeggu ay isbeddelaan waqti ka dib. Waa waajibaadkaaga inaad hubiso inaad Akhrisay, fahamtay oo aad ogolaatay shuruudaha ugu dambeeyay ee laga heli karo Websaydhka.
Mararka qaarkood Zeevou waxaa laga yaabaa inay isbedel ku sameyso Heshiisyada sababo jira awgood, sida hagaajinta howlaha jira ama muuqaalada ama ku darida shaqooyin ama astaamo cusub Adeegga, fulinta horumarka sayniska iyo teknolojiyadda, iyo hagaajinta farsamada macquulka ah ee Adeegga, hubinta hawlqabadka ama amniga Adeegga, iyo sababo sharci ama sharciyeed awgood. Markay Zeevou wax ka beddel ku sameyso heshiisyada, waxaan ku siin doonnaa ogeysiis sida ugu habboon duruufaha jira, tusaale ahaan, iyadoo la muujinayo ogeysiis caan ah ama laga raadsanayo heshiiskaaga Adeegga dhexdiisa ama aan kuu soo dirno emayl. Xaaladaha qaarkood, Zeevou ayaa horay kuu soo ogeysiin doonta, iyo Adeegsigaaga joogtada ah ee Adeegga ka dib isbeddelada la sameeyay waxay ka dhigan tahay Aqbalidaada isbeddelada. Fadlan haddaba hubi inaad si taxaddar leh u akhrido ogeysiis kasta oo noocaas ah. Haddii aadan rabin inaad sii wadato adeegsiga adeegga hoosta nooca cusub ee Heshiisyada, Waad joojin kartaa koontadaada adoo noo soo diraya email guul@zeevou.com.
Zeevou waxay sameyn doontaa dadaal macquul ah si Adeeggu u sii socdo. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka farsamada qaarkood, dayactirka ama tijaabinta, ama cusbooneysiinta loo baahan yahay si loo muujiyo isbeddelada sharciyada khuseeya iyo shuruudaha sharciyeynta, ayaa laga yaabaa, in waqti ka waqti, ay sababaan hakad ku meel gaar ah. Zeevou waxay xaq u leedahay, marmar iyo waqti kasta, inay wax ka beddesho ama joojiso, si ku meel gaar ah ama joogto ah, howlaha iyo astaamaha Adeegga, iyadoo horay loo sii ogeysiinayo halka ay suurogal tahay, dhammaantood aan wax masuuliyad ah lagaa saareynin, marka laga reebo halka sharcigu mamnuucayo, sababo jira sida haddii ay dhacdo hakad dhab ah, wax ka beddel, ama joojinta Adeegga ama hawl kasta ama muuqaalkeeda, ama u baahan dayactir, dayactir ama hagaajinta shaqooyinka jira ama astaamaha jira, ama lagu daro shaqooyin ama astaamo cusub Adeegga, ama lagu hirgeliyo sayniska iyo tikniyoolajiyadda ama xaqiijinta hawlgalka ama amniga Adeegga, sababo sharci iyo sharciyeed.
Markaad isdiiwaangaliso adeegsiga Waxaad qiraysaa inaad aqrisay oo aad fahamtay Shuruudahaan iyo kan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah (laga heli karo at https://zeevou.com/privacy-policy/) kaas oo qeexaya sida aan u shaqeyno xogta shakhsiga ah. Waxaad sidoo kale qireysaa inaad awood u leedahay inaad wakiil uga noqoto qof kasta oo aad Adeegga u adeegsanayso. Waxaa laguu tixgeliyaa inaad ku oggolaatay Shuruudahaan adiga oo matalaya hay'ad kasta oo aad Adeegga u adeegto.
waxaa loola jeedaa Shuruudaha Adeegga.
macnaheedu waa khidmadda billaha ah (marka laga reebo wixii cashuur iyo waajib ah) ee aad bixinaysid iyadoo la raacayo Jadwalka Khidmadda.
“Macluumaad Qarsoodi ah”
waxaa ku jira dhammaan macluumaadka ay isweydaarsadeen dhinacyada Heshiiskan, ha ahaato qoraal, elektaroonig ahaan ama hadal ahaan, oo ay ku jiraan Adeegga laakiin kuma jiraan macluumaadka kaas oo ah, ama noqonaya, meel fagaare ah laga heli karo marka laga reebo shaacinta aan la oggoleyn ee dhinaca kale.
waxaa loola jeedaa wixii xog ah ama waxyaabaha ku jira ee adigu ama hay'addaadu geliso Websaydhka.
waxaa loola jeedaa macluumaadka la xiriira ka-qayb-qaadashada iyo biil-bixinta ku qoran liisaska Zeevou iyo bogagga lacag-bixinta ee website, ama bog kale (yada) websaydhka ay ogeysiisay Zeevou, oo laga yaabo in lagu cusbooneysiiyo ama wax ka beddelo Zeevou waqti ka waqti.
“Xuquuqda Hantida Caqliyeed”
macnaheedu waa rukhsad kasta, astaan ​​ganacsi, calaamado adeeg, xuquuq daabacaad, xuquuq akhlaaqeed, xaq u leh naqshad, aqoon iyo wixii kale ee xuquuqda lahaanshaha aqooneed ama aqooneed, meel kasta oo adduunka ka mid ah ha ahaado ama ha diwaan gasho.
waxaa loola jeedaa adeegyada maareynta martigelinta ee la heli karo (sida laga yaabo in loo beddelo ama loo cusbooneysiiyo waqti ka waqti Zeevou) iyada oo loo marayo Websaydhka.
waxaa loola jeedaa barta internetka ee bogga zeevou.com ama goob kale oo ay maamusho Zeevou.
waxaa loola jeedaa Zeevou Limited, oo lagu daray oo ka diiwaan gashan Jersey oo ka diiwaan gashan lambarka 132351 ee 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands.
“Isticmaalaha la martiqaaday”
macnaheedu waa qof kasta ama hay'ad, oo aan ka ahayn Macmiilka, ee Adeegga u adeegsada oggolaanshaha Macmiilka waqti ka waqti.
waxaa loola jeedaa qofka isdiiwaangaliyay inuu adeegsado Adeegga, iyo, halka macnaha guud ee uu oggol yahay, ay ku jiraan hay'ad kasta oo qofkaas uu isagu iska diiwaangelinayo inuu adeegsado Adeegga.
waxaa loola jeedaa Macmiilka, iyo halka duruuftu saamaxdo, Isticmaalaha la Martiqaaday. "Kaaga" wuxuu leeyahay macno u dhigma.
macnaheedu waa wixii macluumaad ah ee aad adigu ku dartay ama aad ku soo rartay Adeegga loona adeegsaday ujeeddooyinka suuq-geynta ama matalaadda alaabtaada ama adeegyadaada oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, sawirrada, sharaxaada, adeegyada, iyo dib u eegista.
2. Adeegsiga Software
Zeevou waxay ku siinaysaa xuquuqda aad ku heli karto kuna adeegsan karto Adeegga adoo adeegsanaya websaydhka oo leh doorka isticmaalaha gaarka ah ee aad adigu heli karto adiga oo raacaya nooca rukunkaaga. Xaqan waa mid aan gaar aheyn, lama wareejin karo, oo waxaa xadidaya kuna xiran Heshiiskan. Waad qiraysaa oo aad ogolaatay taas, iyada oo ku xidhan heshiis kasta oo khuseeya oo qoran oo u dhexeeya Macaamiisha iyo Isticmaalayaasha La Martiqaaday, ama sharciyo kale oo khuseeya:
1. Macmiilku wuxuu go'aaminayaa cidda Isticmaalaha la Casuumay iyo heerka doorka adeegsadaha ee laga helayo hay'adda iyo Adeegga la Casumay ee ay khusayso;
2. Macmiilku wuxuu mas'uul ka yahay dhammaan Isticmaalayaasha La Casumay ee Adeegga ee la xiriira ururkooda;
3. Macaamiilku wuxuu xukumaa heer kasta oo Macaamil La Casumay ah oo marin u leh urur iyo Adeeg khuseeya wakhti kasta wuxuuna ka noqon karaa ama beddeli karaa marin u helka Isticmaalaha, ama heerka marin u helista, waqti kasta iyo sabab kasta ha noqotee, qofkaas ama ciddaas joojinayaa inuu ahaado Isticmaalaha la Martiqaaday ama yeelan doono heerka marinkaas ka duwan, sida kiisku noqon karo;
4. haddii uu jiro wax khilaaf ah oo u dhexeeya Macmiil iyo Macaamil la Martiqaaday oo ku saabsan marin u helista urur ama Adeeg kasta, Macaamiilku waa inuu go'aansadaa marin u helidda ama heerka marin u helidda Macluumaadka ama Adeegga la Xiriira ee Macaamilka la Martiqaaday uu yeelan doono, haddii ay jiraan, ee Macaamiisha abaabulid.
5. Zeevou waxay xaq u lahaan doontaa inay koonto ugu sameyso isticmaale kasta oo lagu casuumay si toos ahna ula xiriir. Isticmaalaha la casuumay wuxuu xaq u lahaan doonaa inuu la macaamilo Zeevou Macaamiil ahaan wuxuuna la macaamili karaa ururrada kale ee sidoo kale adeegsanaya Adeegyada.
1. Waajibaadka lacag bixinta:
Zeevou waxay ku shaqeysaa Qorshe Bilaash ah iyo Lacag Bixin. Haddii aadan ku jirin Qorshaha Bilaashka ah, an qaansheegta loogu talagalay Kharashka Helitaanka waxaa la soo saari doonaa bil kasta iyadoo la raacayo faahfaahinta lagu muujiyey Jadwalka Khidmadda. Zeevou way kusii wadi doontaa qaansheegashada adiga oo raacaya Jadwalka Khidmadda illaa heshiiskan la joojinayo iyadoo la raacayo faqradda 8.
Dhammaan qaansheegooyinka Zeevou ayaa laguugu soo diri doonaa Adiga, ama Xiriir Biil oo faahfaahintiisa aad adigu ku bixiso, emayl ahaan. Bixinta dhammaan qaddarka lagu qeexay qaansheegta waa in lagu bixiyaa iyadoo la raacayo Jadwalka Kharashka. Adiga ayaa mas'uul ka ah bixinta dhammaan canshuuraha iyo waajibaadka marka lagu daro Lacagta Helitaanka.
Zeevou way beddeli kartaa qiimaha Diiwaangelinta Bixisay, oo ay ku jiraan khidmadaha rukumashada ee soo noqnoqda, Muddada Lacag-Bixinta (ee muddooyinka aan weli la bixin), ama Koodhadhka, waqti ka waqti waxayna kula soo socodsiin doontaa wixii isbeddel ah ee sicirrada adiga horay iyo, haddii ay khuseyso, sida loo aqbalo isbeddeladaas. Isbedelada sicirka waxay dhaqangalayaan bilowga xilliga xiga ee ku xigta taariikhda isbedelka qiimaha. Iyada oo ku xiran sharciga quseeya, Waxaad aqbashaa qiimaha cusub adoo sii wadaya adeegsiga Adeegga ka dib isbedelka sicirka uu dhaqan galo. Haddii aadan ku raacsanayn isbeddelka qiimaha, Waxaad xaq u leedahay inaad diiddo isbeddelka adiga oo ka saaraya rukunka Bixinta kahor intaan qiimaha isbeddelku dhaqan gelin. Marka VAT ay khuseyso, waxaad ogolaatay inaad tan ku bixiso korka qiimaha jira.
Haddii aad iska diiwaangelisid Diiwaangelin Lacag Leh, Waad beddeli kartaa maskaxdaada sabab kasta ha noqotee ama sabab ha noqotee oo waxaad heli kartaa lacag celin buuxda oo ah dhammaan lacagaha la bixiyo soddon (30) maalmood gudahood laga bilaabo maalinta aad is-qorto adeegga ku habboon ("Qaboojinta- Muddada ka baxsan ") iyadoo la raacayo waxyaabaha soo socda:
Haddii aad isku qorto Tijaabo, Waad oggoshahay in Muddada Qaboojinta ee Diiwaangelinta Mushaharka ah ee aad ku helayso Maxkamad ay bilaabmayso afar iyo toban (14) maalmood ka dib Markaad Bilaabdo Maxkamadeynta. Haddii aadan tirtirin rukhsadda Bixinta kahor intaanay dhammaan muddada Qaboojinta, Waxaad luminaysaa Xaqa aad u leedahay ka noqoshada oo waxaad u oggolaaneysaa Zeevou inay si otomaatig ah kuugu soo dallacdo qiimaha lagu heshiiyey bil kasta illaa iyo intaad ka noqonayso Diiwaangelinta Bixinta.
Haddii aad iibsato Diiwaangelin Lacag La'aan ah oo aan Tijaabo lahayn, Waxaad u oggolaatay Zeevou inay si otomaatig ah kuugu soo dallacdo bil kasta illaa aad ka noqoto. Waxaad ogolaatay in Muddada Qaboojinta la heli karo afar iyo toban (28) maalmood ka dib Markii aad iibsatay laakiin la lumiyey mar aad Adeegga isticmaasho muddadaas.
Haddii aad aamminsan tahay in Zeevou ay si khaldan kuugu dallacday, Waa inaad la xiriirtaa Zeevou ugu dambeyn 60 maalmood kadib taariikhda xiritaanka ee bayaan-bixinta ugu horreysa ee qaladka ama dhibaatada ka muuqatay, si aad u hesho hagaajin ama deyn. Weydiimaha waa in lagu hagaajiyaa Kooxda Guusha Lamaanaha ee Zeevou.
2. Qiimeyn ama qiimo dhimis
Waqti ka waqti ayaa lagugu siin karaa qiimeyn doorbidid ama qiimo dhimis ah khidmadaha Helitaanka taas oo ay sabab u tahay tirada hay'adaha aad ku dartay Adeegga ama kuwa lagu daray maamulkaaga ama isticmaalka Adeegga ( 'Ururada'). U-qalmitaanka qiimeynta noocaas ah ama qiime-dhimista waxay ku xiran tahay Aqbalidaada mas'uuliyadda bixinta wixii Kharash-Bixin ah ee la xiriira dhammaan Ururadaada. Iyadoo aan loo aabo yeelin xuquuq kasta oo kale oo Zeevou ku lahaan karto Shuruudahaan ama sharciga, Zeevou waxay xaq u leedahay inay bixiso qaansheegta oo ah Khidmadaha Helitaanka oo buuxa (aan la dhimin) ay mudan tahay ama hakiso ama joojiso Adeeggaaga Adeegga iyadoo la tixgelinayo mid ama dhammaan ee Hay'adahaaga haddii ay dhacdo in qaansheegad kasta oo loogu talagalay Khidmadaha Helitaanka aan si buuxda loo bixin iyadoo la raacayo shuruudaha ku xusan Jadwalka Khidmadda.
Waxaan sidoo kale bixin karnaa qorshooyin xayeysiin gaar ah, xubinnimo, ama adeegyo, oo ay ku jiraan bixinta alaabada iyo adeegyada dhinac saddexaad oo lala xiriirinayo ama loo marayo Adeegga. Annaga mas'uul kama nihin alaabada iyo adeegyada ay bixiyaan dhinacyada saddexaad. Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka beddelno, joojinno ama haddii kale wax ka beddelno qorshayaasheenna diiwaangelinta ee la bixiyo iyo deeqaha dhiirrigelinta ah wakhti kasta oo la waafajiyo Shuruudahaan.
Haddii aad iibsatay ama heshay koodh, kaarka hadiyadda, dalab hore loo sii bixiyey ama dalab kale oo ay bixiyeen ama ku iibiyeen ama ku meteleen Zeevou si ay u helaan Diiwaangelin Lacag Bixin ah ("Code"), shuruudo iyo xaalado gaar ah oo laguu soo bandhigay oo ay weheliso Xeerku sidoo kale wuu ku khuseyn karaa marin u helkaaga adeegga adiguna waad ogolaatay inaad uhogaansato shuruudaha iyo xaaladaha noocaas ah. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa gelitaanka Diiwaangelinta Bixinta iyada oo loo marayo dhinac saddexaad. Xaaladaha noocaas ah, shuruudaha iyo xaaladaha kaladuwan ee noocaas saddexaad ah marka lagu daro Heshiisyada ayaa lagu dabaqi karaa Helitaankaaga Adeegga.
3. Waajibaadka guud:
Waa inaad kaliya u isticmaashaa Adeegga iyo Websaydhka Ujeeddooyinkaaga ganacsi ee sharci ahaaneed ee gaarka ah, iyadoo la raacayo Shuruudahaan iyo ogeysiis kasta oo ay dirtay Zeevou ama xaalad lagu dhejiyay Websaydhka. Waxaad adeegsan kartaa Adeegga iyo Websaydhka adiga oo ka wakiil ah kuwa kale ama si aad adeegyo ugu fidiso kuwa kale laakiin haddii aad sidaas sameyso Waa inaad hubisaa inaad awood u leedahay inaad sidaas sameyso iyo in dhammaan dadka loo fidinayo ama loo fidinayo adeegyada ay u hoggaansamaan oo ay aqbalaan dhammaan shuruudaha Heshiiskan adiga ku khuseeya.
4. Xaaladaha gelitaanka:
1. Waa inaad hubisaa in dhammaan magacyada adeegsada iyo erayga sirta ah ee looga baahan yahay helitaanka Adeegga ay ahaadaan kuwo aamin ah oo qarsoodi ah. Waa inaad isla markaaba ogeysiisaa Zeevou wixii adeegsi aan idmanayn ee furahaaga sirta ah ama wixii kale ee jabinta amniga ah Zeevou waxay dib u dejin doontaa eraygaaga sirta ah waana inaad qaadataa dhammaan tallaabooyinka kale ee Zeevou ay si macquul ah ugu aragto inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ama kor u qaadista amniga nidaamyada xisaabinta iyo shabakadaha Zeevou iyo helitaanka Adeegyada. Zeevou waxay xaq u leedahay inay diido diiwaangelinta, ama tirtirto furaha sirta ah ee ay u aragto inaysan ku habboonayn.
2. Xaaladda Shuruudahaan, markaad marinayso iyo adeegsiga Adeegyada, waa inaad:
aniga. ha isku dayin inaad wax u dhimeyso amniga ama sharafta nidaamyada xisaabinta ama shabakadaha Zeevou ama, halkaasoo Adeegyada ay martigaliyaan dhinac saddexaad, nidaamyada xisaabinta iyo shabakadaha kooxda saddexaad;
ii. ha u isticmaalin, ama si xun u adeegsan, adeegyadu haba yaraatee ee wax u dhimi kara shaqooyinka Adeegyada ama Websaydhada, ama nidaamyo kale oo loo adeegsaday in lagu bixiyo Adeegyada ama wax u dhimaan awoodda isticmaale kasta oo kale u adeegsado Adeegyada ama Websaydhka;
iii. ha isku dayin inaad marin u hesho ogolaansho la'aan qalab kale oo aan ahayn kuwa lagu siiyay ogolaansho deg deg ah inaad ku soo gasho ama nidaamka kombiyuutarka ee Adeegyada lagu marti galiyo;
iv. laguma gudbin karo, ama laguma soo gelin karo Websaydhka, midkoodna: faylasha wax u dhimi kara aaladaha kale ee xisaabinta ama softiweerka, waxyaabaha laga yaabo inay noqon karaan kuwo xadgudub ah, ama qalab ama Macluumaad ku xadgudbaya sharci kasta (oo ay ku jiraan Xogta ama waxyaabaha kale ee lagu ilaaliyo xuquuqda sirta ama ganacsiga oo aadan xaq u lahayn inaad isticmaasho); iyo
v. isku dayin inaad wax ka beddesho, nuqul ka sameyso, la qabsato, soo saarto, kala furfurto, kala-soocdo ama dib u rogto injineer wixii barnaamijyo kombuyuutar ah oo loo adeegsado bixinta Adeegyada ama ka shaqeynta Websaydhka marka laga reebo inay si adag ugu baahan tahay in midkoodna loogu isticmaalo hawlgal caadi ah.
In kasta oo Zeevou aysan waajib ku ahayn inay kormeerto Adeegsigaaga Adeegyada, haddana Zeevou way sameyn kartaa oo waxay mamnuuci kartaa adeegsiga Adeegyada ay rumeysan tahay inay (ama lagu eedeynayo inay tahay) ku tumashada arrimaha kor ku xusan.
5. Xaddidaadda Isticmaalka:
Adeegsiga Adeegga waxaa laga yaabaa inuu hoos yimaado xaddidaadyo, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xaddiga Xogta ee aad ku keydin karto adeegeyaasha Zeevou, ama tirada wicitaannada laguu oggol yahay inaad ku sameyso ka hortagga barnaamijyada barnaamijka Zeevou. Xaddidaad kasta oo noocaas ah ayaa lagula talin doonaa.
6. Xaaladaha Wada Xiriirka:
Xaalad ahaan Shuruudahan, haddii aad isticmaasho qalab kasta oo isgaarsiineed oo laga heli karo Websaydhka (sida goob kasta, qolka lagu sheekeysto ama xarunta farriinta), Waxaad ogolaatay oo keliya inaad u isticmaasho aaladaha isgaarsiinta noocaas ah ujeeddooyin sharci iyo sharci ah. Waa inaadan isticmaalin qalab kasta oo isgaarsiineed oo noocaas ah si aad ugu dirto ama u faafiso wax kasta oo aan la xiriirin isticmaalka Adeegyada, oo ay ku jiraan (laakiin aan ku xaddidnayn): bixinta alaabooyinka ama adeegyada iibka ah, iimayl ganacsi oo aan la weydiisan karin, faylal waxyeellayn kara qof kasta oo kale xisaabinta. aaladaha ama softiweerka, waxyaabaha laga yaabo inay xadgudub ku yihiin kuwa kale ee Adeegyada ama Websaydhka, ama waxyaabo xadgudub ku ah sharci kasta (oo ay ku jiraan waxyaabo ay ilaalinayaan xuquuqda daabacaadda ama sirta ganacsiga ee aanad xaq u lahayn inaad isticmaasho).
Markaad wax xiriir ah ka sameysid Websaydhada, Waad mataleysaa in laguu oggol yahay inaad isgaarsiinta noocaas ah sameyso. Zeevou waajib kuma saarna in ay hubiso in isgaarsiinta websaydhka ay sharci yihiin ama ay la xiriiraan oo keliya isticmaalka Adeegyada. Sida madal kasta oo kale oo ku saleysan websaydhka, Waa inaad taxaddar muujisaa markaad isticmaaleyso qalabka isgaarsiinta ee laga heli karo Websaydhka. Si kastaba ha noqotee, Zeevou waxay xaq u leedahay inay ka saarto wixii xiriir ah wakhti kasta iyada oo kaligeed ikhtiyaar u ah.
Waxaad magdhow ka siineysaa Zeevou diidmada: dhammaan sheegashooyinka, kharashyada, waxyeelada iyo khasaaraha ka yimaada Jabinta mid ka mid ah Shuruudaan ama waajibaad kasta oo lagaa rabo inaad ku qabato Zeevou, oo ay ku jiraan (laakiin aan ku xaddidnayn) wixii kharash ah ee la xiriira soo kabashada wixii Kharashyada Helitaanka ee ah lagaa rabo laakiin aadan bixin adigu.
4. Sirta iyo Asturnaanta
Ilaa iyo inta ay khusayso ay haysato ogolaanshaha hore ee qoraal ee kan kale ama haddii aanu sharcigu u baahnayn:
1. Dhinac kasta wuxuu ilaalin doonaa sirta dhammaan macluumaadka Qarsoodiga ah ee kan kale ee laga helo ee la xiriira Shuruudahaan. Labada dhinac midkoodna, isagoon haysan ogolaansho qoraal ah oo qoraal ah kan kale, ma siinayo ama uma siinayo wax Macluumaad Qarsoodi ah qofkasta oo uu heli karo, ama uma isticmaali doono isla wixii faa iidadiisa ah, marka laga reebo kuwa ku fikiraya Shuruudahaan.
2. Waajibaadka dhinac kasta ee ku xusan qodobkan wuxuu ka badbaadi doonaa joojinta Shuruudahaan.
3. Qodobada qodobada 4.1.1 iyo 4.1.2 laguma dabaqi doono macluumaad kasta oo:
aniga. yahay ama noqda aqoon guud oo aan ka ahayn jebinta qodobkan;
ii. waxaa laga helaa gacan saddexaad oo si sharci ah ku heshay isla markaana aan ku qasbaneyn xadidaad siideyntiisa;
iii. ay ku jirto gacanta kooxda heleysa iyadoon xadidneyn oo la xiriirta shaacinta kahor taariikhda rasiidka ee kooxda shaacinta; ama
iv. si madax-bannaan loo horumariyo iyada oo aan la helin Macluumaadka Qarsoodiga ah.
Zeevou wuxuu hayaa siyaasad gaar ah oo qeexaysa waajibaadka saaran dhinacyada macluumaadka shakhsiyeed. Waa inaad ka aqriso siyaasadaas zeevou.com/privacy-policy/ waxaana lagaa qaadi doonaa inaad aqbasho siyaasadaas markaad aqbasho Shuruudahaan.
Zeevou waxay ku siineysaa qaab wax lagu saxo oo ah Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee aad u adeegsan karto ururkaaga, tanina si toos ah ayaa loogu darayaa websaydhka ay Zeevou kuu soo saarayso. Markaad la saxiixato Zeevou, Waxaad ballan qaadday inaad hubiso in shaxanka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah si dhammaystiran loo akhriyey loona beddelay baahiyahaaga, waxaadna qireysaa in Zeevou aysan bixinayn wax talo ah adoo siinaya qaabkan isla markaana aan lagu qaadi karin mas'uuliyadda saxda ama saamaynta sharci ee isticmaalka shaxanka. Waxaad qireysaa inay tahay masuuliyadaada kaliya inaad hubiso inaad leedahay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee ugu dambeeyay tanina waxay ka tarjumaysaa habsami u socodka ganacsigaaga. Siyaasad kasta oo asturnaan ah oo ay ansaxisay Waa inaad ku darto jumlado ku filan si aad ugu wargeliso Martidaada macluumaadka aad la wadaagto Zeevou iyo dhinacyada kale ee saddexaad.
5. Hantida Garasho
Cinwaanka, iyo dhammaan Xuquuqda Hantida Maskaxda ee Adeegyada, Websaydhka iyo dukumiinti kasta oo la xiriira Adeegyada ayaa ah hantida Zeevou (ama shatiyeyaasheeda).
Codsiyada softiweerka Zeevou iyo Mawduuca lagaa iibin maayo lagumana wareejinayo, Zeevou iyo shati bixiyeyaasheeduna waxay haystaan ​​lahaanshaha dhammaan nuqullada barnaamijyada software-ka Zeevou iyo Mawduucyada xitaa kadib markii lagu rakibo kombiyuutaradaada gaarka ah, moobaylka gacanta, kiniiniyada, aaladaha la xidho, kuwa ku hadla, iyo / ama aalado kale.
Dhammaan alaabooyinka Zeevou, calaamadaha adeegga, magacyada ganacsiga, astaamaha, magacyada domain, iyo astaamo kasta oo kale oo ka mid ah astaanta Zeevou waa hantida keliya ee Zeevou ama shatiyeyaasheeda. Heshiisyadu kuma siinayaan wax xuquuq ah oo aad ku isticmaali karto astaamaha Zeevou Brand ha ahaato mid ganacsi ama mid aan ganacsi ahayn.
2. Lahaanshaha Xogta:
Cinwaanka, iyo dhammaan Xuquuqda Hantida Caqli ee ku jirta, Xogta ayaa ah hantidaada. Si kastaba ha noqotee, Helitaankaaga Xogta waxay kuxirantahay bixinta buuxda ee Kharashka Helitaanka Zeevou markii la joogo. Waxaad siisay Zeevou ruqsad ay ku isticmaasho, nuqul, ku gudbiso, ku kaydiso, iyo ku kaydiso macluumaadkaaga iyo Macluumaadkaaga ujeeddooyinka kuu sahlaya inaad hesho iyo isticmaasho Adeegyada iyo ujeedo kasta oo kale oo la xiriirta bixinta adeegyada adiga.
Waxaad ballan qaadaysaa in, marka loo eego Waxyaabaha Macmiil ee aad ku dhejiso Zeevou, (1) Adiga ayaa leh ama waxaad xaq u leedahay inaad ku dhejiso Mawduuca Isticmaalaha, iyo (2) Mawduuca Isticmaalaha noocaas ah, ama adeegsiga Zeevou ee ku fikiraya Heshiisyada, kuma xadgudbaan Heshiisyada ama xuquuq kasta oo kale oo lagu muujiyey tilmaamaha Isticmaalaha, sharciga lagu dabaqi karo, ama hantida aqooneed, xayeysiinta, shakhsiyadda, ama xuquuqda kale ee dadka kale ama tilmaamaysa xiriir la leh ama oggolaansho adiga ama Mawduucaaga Isticmaalka ee Zeevou ama farshaxan kasta , band, sumad, hay'ad ama shaqsi iyada oo aan ogolaansho qoraal ah laga helin Zeevou ama shaqsi ama hay'ad noocaas ah.
Zeevou waa laga yaabaa, laakiin waajib kuma aha inay, kormeerto, dib u eegto, ama tafatirto Mawduuca Isticmaalaha. Xaaladaha oo dhan, Zeevou waxay xaq u leedahay inay ka saarto ama ka joojiso marin u helka Waxyaabaha Isticmaalaha sababo kasta ama sabab la'aan, oo ay ku jiraan Mawduucyada Isticmaalaha ee, Zeevou keligeed ikhtiyaar u ah, ku xad gudbeyso Heshiisyada. Zeevou waxay qaadi kartaa talaabooyinkan iyada oo aan lagugu wargelin adiga ama cid saddexaad. Ka saarida ama curyaaminta marin u helka Mawduucyada Isticmaalaha waxay ku xirnaan doontaa go'aankeena, mana ballanqaadayno inaan ka saarno ama joojinno marin u helidda Waxyaabaha gaarka ah ee Isticmaalaha.
Waxaad siisay Zeevou mid aan gaar aheyn, la wareejin karo, ruqsad aan sharciyeysneyn, lacag la'aan ah boqortooyo, joogto ah (ama, xukunnada halkaan aan la oggolaan karin, muddada u dhiganta muddada Heshiisyada oo lagu daray labaatan (20) sano), lama beddeli karo, si buuxda loo bixiyo, liisanka adduunka oo dhan si loo isticmaalo, loo soo saaro, loo soo bandhigo dadweynaha (tusaale ahaan waxqabad ama bandhig), daabac, turjumaad, wax ka beddel, abuurista shaqooyin ka soo jeeda, iyo u qaybi mid kasta oo ka mid ah Mawduucaaga Isticmaalka ee la xiriira Adeegga iyada oo loo marayo dhexdhexaadin kasta, ha noqoto keligiis ama lagu daro Mawduucyo kale ama qalab kale, si kasta iyo qaab kasta, qaab ama farsamo, ha ahaato mid hadda la yaqaan ama aakhiro la abuuray. Marka laga reebo xuquuqda sida gaarka ah loogu siiyay halkan, Waxaad ku haysaa lahaanshaha dhammaan xuquuqda, oo ay ku jiraan xuquuqda lahaanshaha aqooneed, ee Mawduuca Isticmaalaha. Meeshii lagu dabaqi karo oo laguu oggol yahay sharciga quseeya, Waxaad sidoo kale ogolaatay inaad dhaafeyso oo aadan dhaqan gelin wax kasta oo ah "xuquuq akhlaaqeed" ama xuquuq u dhiganta, sida Xaqa aad u leedahay in laguu aqoonsado inuu yahay qoraaga Mawduuc kasta oo Isticmaalaha ah, oo ay ku jirto Jawaab celinta, iyo Xuquuqda aad u leedahay inaad diiddo xaqiraadda daaweynta Mawduuca Isticmaalaha.
Iyadoo aan loo eegin wax kasta oo lid ku ah, Zeevou waxay lahaan doontaa xaq u ururinta iyo falanqaynta xogta iyo macluumaadka kale ee la xiriira bixinta, adeegsiga iyo waxqabadka dhinacyada kala duwan ee Adeegyada iyo nidaamyada la xiriira iyo teknoolojiyada (oo ay ku jiraan, iyadoon xad lahayn, macluumaadka ku saabsan Macluumaadkaaga iyo xogta laga soo qaatay laga bilaabo), iyo Zeevou waxay noqon doontaa bilaash (inta lagu jiro iyo kadib erayga halkan) in (i) loo isticmaalo macluumaadka iyo macluumaadka noocan oo kale ah si loo wanaajiyo loona xoojiyo Adeegyada iyo horumarka kale, ujeedooyinka ogaanshaha iyo saxitaanka ee la xiriira Adeegyada iyo waxyaabaha kale ee Zeevou la bixiyo, iyo (ii) shaacinta xogtaas oo keliya wadar ahaan ama foomka kale ee la aqoonsaday ee la xiriira ganacsigeeda. Wax xuquuq ah ama shati ah lama bixiyo marka laga reebo sida halkan ku cad.
Adiga keliya ayaa mas'uul ka ah dhammaan Mawduucyada aad dhejiso. Zeevou mas'uul kama aha Mawduuca sidoo kale ma ansaxinayo wax fikrad ah oo ku jirta Mawduuc kasta. Waad ogolaatay IN HADDII QOF KASOO KOOBANAYA EEDAYN KU SAABSAN ZEEVOU LA XIRIIRKA QAABKA UU ISTICMAALO INTAA LAGU SAMEEYAY, MARKAAS, IN LAGU OGGOL YAHAY IN LAGU SAMEEYO SHARCIGA HOOSE, INAAD TAHAY IN AAD CADDAYN DOONTID OO AAD HAYSID DHIBAATOOYINKA ZEEVOU OO KA YIMID OO LAGA HELO DHAMMAAN DHAGAXO, LOSS, KHARASHKA SAHALNIMO EE SAHAL AH IYO KHARASHKA) KASOO BAXAY Eedeynta Noocan ah.
3. Kaabta Xogta:
Waa inaad heysataa nuqulada dhammaan xogta la geliyay Adeegga. Zeevou waxay u hoggaansameysaa siyaasadeeda iyo nidaamkeeda ugu wanaagsan ee looga hortago luminta xogta, oo ay ku jiraan nidaam maalinle ah oo lagu kaydiyo xogta, laakiin ma samaynayso wax dammaanad qaad ah oo ah in aanu jiri doonin luminta Xogta. Zeevou waxay si cad uga reebtay mas'uuliyadda wixii lumay Xogta si kasta oo ay sababtay.
4. Codsiyada dhinac saddexaad iyo Xogtaada:
Haddii aad Awoodsiiso codsiyo dhinac saddexaad ah oo loo adeegsado Adeegyada, Waxaad qireysaa in Zeevou ay u oggolaan karto bixiyeyaasha barnaamijyadaas qeybta saddexaad inay marin u helaan Xogtaada sida looga baahan yahay isdhexgalka barnaamijyada noocaas ah ee dhinacyada saddexaad ee Adeegyada. Zeevou mas'uul kama ahaan doonto shaacinta, wax ka beddelka ama tirtirka Macluumaadkaaga ee ka dhasha marin u helida noocan oo kale ah ee bixiyayaasha dalabyada saddexaad.
6. Damaanad iyo Mahadnaq
Waxaad dammaanad ka qaadaysaa meesha aad ka diiwaangashan tahay inaad u isticmaasho Adeegga qof kale, Waxaad awood u leedahay inaad ku oggolaato Shuruudaan iyadoo wakiil ka ah qofkaas isla markaana aad ku raacsan tahay inaad isdiiwaangeliso isticmaalka Adeegga aad xidho qofka aad wakiil uga tahay waxqabad kasta iyo dhammaan waajibaadka lagugu qasbay adoo adeegsanaya Shuruudahaan, adigoon xadidayn waajibaadkaaga shakhsi ahaaneed ee ku hoos jira Shuruudahaan.
Waad qiraysaa in:
1. Adigu waa laguu oggol yahay inaad adeegsatid Adeegyada iyo Websaydhka iyo inaad marin u hesho macluumaadka iyo Macluumaadka Aad ku soo gasho Websaydhka, oo ay ku jiraan wixii macluumaad ah ama Macluumaadka ay ku soo galaan Websaydhka qof kasta oo Aad u oggolaatay inuu isticmaalo Adeegga. Waxaa sidoo kale laguu oggol yahay inaad marin u hesho macluumaadka la farsameeyay iyo Xogta lagaa heli karo adoo adeegsanaya Websaydhka iyo Adeegyada (ha ahaato macluumaadkaas iyo xogtaadu adigaa iska leh ama qof kaleba).
2. Zeevou mas'uuliyad kama saarna qof aan adiga ahayn oo wax heshiiskan ka mid ah ma sheegayo, ama u jeedinaya in ay bixiso, waxtar u leh qof aan adiga ahayn. Haddii Aad Adeegsato Adeegyada ama aad u gasho Websaydhka adiga oo matalaya ama u daneynaya qof kale oo aan adiga ahayn (ha ahaato hay'ad jir ama haddii kale) Waad ku raacsan tahay:
aniga. Adiga ayaa mas'uul ka ah hubinta inaad Xaq u leedahay inaad sidaa sameyso;
ii. Adiga ayaa mas'uul ka ah oggolaanshaha qof kasta oo loo oggolaado helitaanka macluumaadka ama Xogta, Adiguna waad oggoshahay in Zeevou aysan waajib ku ahayn inay qofna u oggolaato helitaanka macluumaadkaas ama Xogta adiga oo aan lagaa haysan oggolaanshahaaga oo ay kuu gudbin karto wixii codsi ah ee macluumaad ah si aad wax uga qabato; iyo
iii. Waxaad magdhow ka siin doontaa Zeevou wixii sheegasho ama lumis ah ee la xiriira:
aniga. Diidmada Zeevou inay qofkasta siiso marin u helida macluumaadkaaga ama Xogtaada iyadoo la raacayo Shuruudahaan,
ii. Sameynta macluumaadka la heli karo ee Zeevou ama Xogta qof kasta oo leh oggolaanshahaaga.
3. Bixinta, helitaanka, iyo adeegsiga, adeegyadu waxay ku saleysan yihiin "sidii ay ahayd" oo ay qatar kuugu jirto.
4. Zeevou ma damaanad qaadayso in adeeggu uu noqon doono mid aan kala go 'lahayn ama qalad ka caagan. Waxyaabaha kale, hawlgalka iyo helitaanka nidaamyada loo adeegsado helitaanka Adeegga, oo ay ku jiraan adeegyada taleefannada dadweynaha, shabakadaha kombiyuutarka iyo internetka, waxay noqon karaan kuwo aan la saadaalin karin oo laga yaabo inay waqti ka waqti farageliso ama ka hortagto gelitaanka Adeegyada. Zeevou sinnaba ugama mas'uul aha wax faragelin ah ama ka hortag ah Helitaankaaga ama isticmaalka Adeegyada.
5. Zeevou maahan xisaabiyahaaga iyo adeegsiga moduleka xisaabinta ee lagu bixiyo iyadoo qayb ka ah Adeegyada ayaan ka dhigneyn helitaanka talo bixinta xisaabaadka. Haddii aad qabto wax su'aalo xisaabeed ah, fadlan la xiriir xisaabiye.
6. Waa adiga masuuliyadaada kaliya inaad go'aamiso in Adeegyadu ay buuxinayaan baahiyaha ganacsigaaga ayna ku habboon yihiin ujeedooyinka loo adeegsanayo.
7. Adiga ayaa kaliya masuul ka ah u hogaansanaanta dhammaan xisaabaadka, canshuuraha iyo sharciyada kale. Waa masuuliyadaada inaad hubiso keydinta iyo marin u helida Xogtaada iyadoo loo marayo softiweerka iyo websaydhku waxay waafajin doonaan sharciyada adiga kugu habboon (oo ay ku jiraan wixii sharci ah ee kaaga baahan inaad hayso diiwaanada).
8. Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona helitaanka iyo dayactirka wixii qalab iyo adeegyo gacan-qabsi ah oo loo baahan yahay in lagu xiro, marin loo helo ama si kale loo isticmaalo Adeegyada, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xad lahayn, moodeemka, qalabka, sofweerka, softiweerka, nidaamyada hawlgalka, isku xirka, shabakadaha internetka iyo wixii la mid ah (si wadajir ah, "Qalabka"). Waxaad sidoo kale mas'uul ka noqon doontaa ilaalinta amniga Qalabka, Koontadaada, furaha sirta ah (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn lambarka sirta ah ee maamulka iyo isticmaalaha) iyo faylasha, iyo dhammaan adeegsiga koontadaada ama Qalabka leh ama aanad lahayn ogaanshahaaga ama oggolaanshahaaga.
9. Waxaad na siisay xaq (1) u oggolaan Adeegga inuu adeegsado processor-ka, xawaaraha ballaadhinta, iyo qalabka wax lagu kaydiyo ee ku jira Qalabkaaga si loo fududeeyo howlaha Adeegga, (2) inuu ku siiyo xayeysiis iyo macluumaad kale adiga, iyo (3) in loo ogolaado wada-hawlgalayaashayada ganacsi inay iyaguna sidaas oo kale sameeyaan. Qeyb kasta oo ka mid ah Adeegga, Mawduuca aad ka hesho, oo ay ku jiraan xulashadiisa iyo meeleyntiisa, waxaa saameyn ku yeelan kara tixgelinta ganacsiga, oo ay ku jiraan heshiisyada Zeevou ee dhinacyada saddexaad.
10. Haddii aad siiso jawaab celin, fikrado, ama talo soo jeedin ah Zeevou oo la xiriirta Adeegga, Waxaad qiraysaa in Jawaab celinta aysan ahayn mid qarsoodi ah oo aad adigu u fasaxday Zeevou inay u isticmaasho Jawaab celintaas xaddid la'aan iyo lacag la'aan adiga. Jawaab celinta waxaa loo tixgeliyaa nooc Xog ah.
11. Haddii Zeevou uu ogeysiiyo qof heysta xuquuqda lahaanshaha, iyadoo la adeegsanayo foomamka ay bixiso Zeevou, in Wax kasta oo ka mid ah Mawduucyadu ay ku xadgudbayaan xuquuqda daabacaadda, Zeevou iyada ayaa ikhtiyaar u ah inay ka saarto Macluumaadka Isticmaalaha noocaas ah Adeegga, ama ay qaaddo tallaabooyin kale oo ay Zeevou u aragto inay habboon tahay, ogeysiis hore oo loosameeyay isticmaalaha ama qeybta kale ee keensatay ama soo dirtay Mawduucaas. Haddii isticmaalaha noocaas ah ama dhinac kale uu rumeysan yahay in Mawduuca Isticmaalaha uusan ku xadgudbeyn, isaga ama iyadu xaaladaha qaarkood waxay u gudbin karaan ogeysiis diidmo ah Zeevou oo ay ku codsanayaan in la soo celiyo waxyaabaha laga saaray, taas oo Zeevou ay ku sharfi karto ama ku sharfi karto, Zeevou keligeed ayaa iska leh .
12. Markaad nagala soo xiriirto caawimaad marin kasta oo koontadaada ah, waxaad qiraysaa inaad na siineyso xaq aan ku galno koontadaada oo aan u helno Xogtaada oo dhameystiran si aan isugu dayno oo aan kaaga caawinno weydiintaada.
13. Zeevou waxaa loo oggol yahay inay xayeysiiso xaqiiqda ah inaad Adeegsato Adeegyada.
14. Macluumaad kasta oo Marti ah oo aad ku soo gasho Adeeggaaga si toos ah ama adoo adeegsanaya barnaamijyo dhinac saddexaad ama softwares, waxaa u adeegsan kara Zeevou ujeedooyinka suuqgeynta. Waxaad sidoo kale u fasaxday Zeevou inay la wadaagto dhammaan faahfaahinta la xiriira Martida ku soo gashay Adeegga macaamiisha kale ee Zeevou. Marti kasta oo lagu daro barnaamijka, wuxuu noqon karaa isticmaale madax-bannaan Adeegyada iyo wixii adeegyo ah ee la xiriira ee ay bixiyaan la-hawlgalayaasha dhinac saddexaad.
15. Haddii aad hesho Xaquuqda tirtirida ama Xaquuqda saxida ee hoos timaada GDPR mid kamid ah Martidaada, waxaa lagaa doonayaa inaad uga jawaabto iyaga oo aad wax ka qabato codsigooda. Haddii Zeevou loo diro Xaquuqda Tirtirid ama Xaquuqda Dhaqancelinta ee Martida, Zeevou waxay xaq u leedahay inay sameyso wixii isbedel ah ee lagama maarmaanka ah, tirtirida ama wax ka bedelka xogta Martida ee ku keydsan Zeevou.
3. Ma jiraan wax damaanad ah:
Zeevou ma siinayo wax damaanad ah oo ku saabsan Adeegyada. Adiga oo aan xadidayn waxyaalaha aan soo sheegnay, Zeevou ma dammaanad qaadayso in Adeegyadu ay buuxinayaan shuruudahaaga ama ay ku habboonaan doonaan ujeeddo kasta oo gaar ah. Si looga fogaado shaki, dhammaan shuruudaha ama damaanad-qaadyada ayaa laga reebay illaa iyo inta sharcigu oggol yahay, oo ay ku jiraan (aan xadidnayn) damaanadaha baayacmushtarka, u-qalmitaanka ujeedo, cinwaan iyo ku-xadgudub la'aan.
4. Dammaanad qaadka macaamiisha:
Waad dammaanad qaadaysaa oo aad mataleysaa inaad xaq u leedahay helitaanka iyo adeegsiga Adeegyada ujeeddooyin ganacsi iyo in, illaa xadka ugu badan ee sharcigu oggol yahay, dammaanad kasta oo macaamil sharci ah ama sharci loogu talagalay in lagu ilaaliyo macaamiisha aan ganacsiga ahayn ee awood kasta oo ay leedahay ma khuseeyo bixinta Adeegyada, Websaydhka ama Shuruudaan.
7. Xadidaadda mas'uuliyadda
1. Ilaa xadka ugu badan ee sharcigu oggol yahay, Zeevou waxay ka reebaysaa dhammaan mas'uuliyadda iyo mas'uuliyadda Adiga (ama qof kale) qandaraaska, jirdil (oo ay ku jirto dayacaad), ama haddii kale, wixii lumis ah (oo ay ku jiraan luminta macluumaadka, Xogta, faa'iidooyinka iyo keydinta) ) ama waxyeelo ka dhalata, si toos ah ama si dadban, adeegsi kasta, ama ku tiirsanaanta, Adeegga ama Websaydhada.
2. Haddii aad dhibaato ama dhaawac soo gaadho dardaaranka Zeevou dartiis ama aad u hogaansami waydo Shuruudahaan, sheegasho kasta oo adigu ka soo horjeedo Zeevou oo ka timaadda dayacaadda Zeevou ama guuldaradeeda waa la xaddidi doonaa marka loo eego hal dhacdo, ama dhacdooyin taxane ah oo xidhiidhsan, khidmadaha Helitaanka ee aad bixisay 12-kii bilood ee hore.
3. Haddii aadan ku qanacsanayn Adeegga, Xalkaaga keliya ee khaaska ah ayaa ah inaad joojiso Shuruudahaan si waafaqsan faqradda 8.
Waad ogolaatay in ZEEVOU aysan lahayn wax waajibaad ah ama mas'uuliyad ah oo ka timaada ama la xiriirta arjiyada sadexaad ee xisbiyada ama nuxurka THEREOF EE LAGU HELI KARO AMA KU XIRAN ADEEGA, IYO INTA AAD XIRIIRKAAGA KU LEEYAHAY SIYAASADDA SADDEXAAD , SULDAANKAAGA IYO XAQIIJINTA KELIYA, SIDA IXTIRAAM LOOGU LEEYAHAY ZEEVOU, DHIBAATOOYIN KASTA AMA QANCIN LAGU SOO QAADO CODSIYADA SADDEXAAD AMA NUXURKA KOOBAN, WAA IN LA SOO JOOJIYO IYO / AMA LA JOOJIYO CODSIYADA XISBIGA SADDEXAAD.
DHACDOOYINKA ZEEVOU MA JOOJO, SHAQAALAHIISA, SHAREELAYAASHA, SHAQAALAHA, WAKIILADDA, AGAASIMAYAASHA, SUBSIDIARIES, KU XIDHIIDHAYAASHA, GUULEYAASHA, SHAQAALAHA, QAABILAYAASHA, AMA SHAQAALAHA
(1) QASAARO AMA DHAR AH (OO AY KU JIRAAN SIR KASTA OO GAAR AH, GAAR AH, DHACDO BADAN, AMA DHAQAN AH, HALIS) AAN LAMA SII HELI KARO. QASAAR AMA DHARKA WAA LA SII HELI KARAA HADDII AY TAHAY AMA CAD BADAN IN AY DHACDO AMA HADDII, WAQTIGII LAGA SAMEEYAY Qandaraaskan, Labadaba Anaga iyo Adiga ayaa garaneyna in aan awoodno;
(2) WAX KASTA: (A) WAAYO ISTICMAAL; (B) LUMAHA XOGTA; (C) LUGTA GANACSIGA; (D) Khasaaraha faa'iidooyinka; AMA (E) KHATAR U LEH KHAYRADKA, SIDII AAD UGA HORTAGI KARTAA QARAXA NOOCA AH INAAD RAACSATO TALOOYINKA AAN KU DALBAYO CODSIYADA ADEEGYADA AMA KU JIRA AMA HADDII DHIBAATOOYINKAAS KU SAABSAN YAHAY INAAD KUUGU FASHILANTAHAY INTA SOO SAARAN MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA SHURUUDAHA AAD NOOGU TALISEY, INTA LOOGU SAMEEYO DHAMMAAN XAALADAHA KU SAABSAN ISTICMAALKA AMA AWOODA LA'AANTA EE LOO ISTICMAALO ADEEGA, AALADAHA, CODSIYADA XISBIGA SADDEXAAD, AMA CODSIGA XISBIGA SADDEXAAD, EE AAN LAGA HELI LAHAYN DIIWAANKA DEGGAN. KHATARAHAAS, IYO XATAA HADDII DAWEYNTU KU FASHILATO UJEEDDEEDA MUHIIMKA AH;
(3) WAKHTIGA LACAG LA'AANTA EE DHAMMAAN CODSIYADA LA XIRIIRA ADEEGA, CODSIYADA SADDEXAAD, AMA CODSIGA XISBIGA SADDEXAAD IN KA BADAN QIIMAHA AAD KU BIXISO EE ZEEVOU WAQTIGA BILAASHKA LABAAD EE BULSHADA SU'AASHA; AMA
(4) SHAQO LA'AAN AMA FULINTA KU HABAN AMA DIB U DHEH AH WAAJIBAADKA KASOO JEEDA HESHIISYADA AY SOO SAARAN QASAB MAJEURE AMA SABAB KASTA OO AAN SABAB AH LOOGA HELI KARO AMA KA DAMBEEYA KHATARTA SIIVOU EE SABABTA AH.
Ma jiraan wax ka mid ah heshiisyada oo meesha ka saaraya ama xaddidaya mas'uuliyadda Zeevou ee khiyaanada, been-abuurka been-abuurka, dhimashada, ama dhaawaca shaqsiyeed ee ay sababtay dayacaadkeedu, iyo, haddii loo baahdo sharciga quseeya, dayacaad weyn.
QAYBTAAN WUXU UU SHAQAYSAA INTII UGU DANBEEYSAY EE AY OGOLAATO SHARCIGA LA SHAQAYN KARO. WAA INAAD KU LEEDAHAY XUQUUQO SHARCIYADA LAGU SAMEEYO EE XUKUNKAAGA KAGA BIXIYO KHILAAFADDA KU DARSIGA DADKA SARE LAGA SOO SAARO.
Heshiisyadu waxay sii wadi doonaan inay adiga ku khuseeyaan illaa iyo inta ay joojinayaan midkoodna ama Zeevou. Si kastaba ha noqotee, Waad qiraysaa oo aad ogolaatay in liisanka joogtada ah ee aad adigu siiso ee laxiriirta Mawduuca Isticmaalaha, oo ay kujirto Jawaab celin, aan laga noqon karin sidaa darteedna ay sii socon doonto kadib marka ay dhamaato ama joojiso heshiis kasta sabab kastoo ay tahayba. Zeevou way joojin kartaa Heshiisyada ama hakin kartaa marin u helidaada adeega waqti kasta, oo ay kujirto haddii ay dhacdo adeegsigaaga rasmiga ah ama lagaa shaki qabo ee adeegsiga, u hogaansanaan la'aanta heshiisyada, ama hadii aan ka noqono Adeegyada (taas oo aan ku bixinayno Waxaad ogeysiis macquul ah horay usameysaa). Haddii Adiga ama Zeevou joojiso Heshiisyada, ama haddii Zeevou joojiso Helitaankaaga Adeegga, Waxaad ku raacsan tahay in Zeevou yeelan doonin wax masuuliyad ah ama masuuliyad ah oo adiga kugu saabsan, Zeevouna ma soo celin doonto wax lacag ah oo aad horey u bixisay, illaa inta ugu badan ee lagu oggol yahay sharciga ku habboon. Waad joojin kartaa Heshiisyada waqti kasta. Qeybtaan waxaa lagu dhaqangelin doonaa ilaa inta uu oggol yahay sharciga quseeya.
1. Siyaasadda tijaabada
Marka ugu horreysa ee aad isqorto helitaanka Adeegyada Waxaad ku qiimeyn kartaa Adeegyada iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalka tijaabada ee qeexan, iyadoo aysan jirin wax waajib ah oo ku saabsan inaad sii wadato adeegsiga Adeegyada. Haddii aad dooratid inaad sii wadato adeegsiga Adeegyada intaas ka dib, Waxaa lagugu soo dallacayaa markii ugu horreysay ee aad ku darto faahfaahintaada biilka Adeegyada, sida ku xusan faahfaahin dheeri ah ee Jadwalka Khidmadda. Haddii aad doorato inaadan sii wadin adeegsiga Adeegyada, Waad ka tirtiri kartaa ururkaaga 'My Zeevou' qeybta Adeegyada. Zeevou waxay go'aansan kartaa u-qalmitaankaaga Maxkamad, waxayna ka noqon kartaa ama wax ka beddeli kartaa Maxkamad waqti kasta ogeysiis la'aan iyo mas'uuliyad la'aan, illaa inta loo oggol yahay sharciga quseeya.
2. Diiwangelinno Lacageed
Zeevou ma soo celin doono wax lacag celin ah inta ka hartay mudada hore loogu sii qori doono Lacagta Helitaanka Lacagta La Siiyey.
Haddii aad iibsatay Lacag Bixin Bixin ah adoo adeegsanaya Xeer, Diiwaangelintaadu si otomaatig ah ayey u dhammaan doontaa dhammaadka muddada ku xusan Xeerka, ama marka ay jirto lacag-bixin aan ku filnayn oo hore loo sii bixiyey oo lagu bixinayo Adeegga. Haddii aad ku iibsatay Diiwaangelintaada Lacageed iyada oo loo marayo dhinac saddexaad, Waa inaad si toos ah ula noqotaa qaybta saddexaad.
3. Joojinta cillad la'aan:
Shuruudahaani waxay sii socon doonaan muddada ay bixinayso Khidmadda Helitaanka ee la bixiyay ama lagu bixin karo qodobka 3.1. Dhamaadka xilli kasta oo biil ah Shuruudahaan waxay si otomaatig ah u sii socon doonaan muddo kale oo la mid ah muddadaas, waa haddii aad sii waddo bixinta Kharashaadka Helitaanka ee loo qoondeeyay iyadoo loo eegayo Jadwalka ujrada, illaa ay labada dhinac midkoodna ku joojiyaan Shuruudahaan iyagoo siinaya ugu yaraan hal ogeysiiska qoran ee bisha ka hor dhamaadka mudada biilka. Haddii aad doorato inaad joojiso Shuruudaan adoo bixinaya ogeysiis qoraal ah oo hal bil ah, Waxaa lagaa rabaa inaad bixiso dhammaan khidmadaha Helitaanka sida ku xusan Jadwalka Khidmada illaa iyo dhammaadka muddadii ugu dambeysay ee lacag bixinta ee lagu daboolay Jadwalka Khidmadda. Haddii Jadwalka Kharashka aan la soo saarin, oo rukunkaagu uu noqdo mid bille ah, Waa inaad bixin doontaa lacag-bixin illaa iyo dhamaadka ogeysiiska aad dhiibtay.
1. in aad jebiso mid ka mid ah Shuruudaan oo aan lagu xallin jabinta muddo 14 maalmood gudahood ah ka dib marka la helo ogeysiiska jebinta haddii jebinta ay awood u leedahay in wax laga qabto;
2. jebinta mid ka mid ah Shuruudaan iyo jebintu awood uma lahan in wax laga qabto (oo ay ku jiraan (xad la'aan) jebinta qodobka 3.4 ama bixinta wax ubixinta khidmadaha aan si buuxda loo bixin iyadoo la raacayo shuruudaha ku xusan Khidmadda Jadwalka); ama
3. Adiga ama Meheraddaadu noqosho mid kacsan ama Meheraddaadu gasho dheecaan ama waxay leedahay qaabilaad ama maareeye oo loo magacaabay mid ka mid ah hantideeda ama haddii aad Noqoto mid aan wax goyn karin, ama aad wax heshiis ah la sameysid deyn-bixiyeyaashaada, ama aad ku xiran tahay dhacdo la mid ah lacag la'aantu xukun,
Zeevou waxay qaadan kartaa mid ama dhammaan talaabooyinka soo socda, iyada oo ku xiran go'aankeeda:
4. Jooji Heshiiskan iyo Adeegsigaaga Adeegyada iyo Websaydhka;
5. Ka jooji wakhti kasta oo qeexan ama aan xadidnayn, Isticmaalkaaga Adeegyada iyo Websaydhka;
6. Hakinta ama joojinta marin u helka dhammaan ama wixii Xog ah.
7. Qaado mid ka mid ah ficillada ku xusan qodob-hoosaadyada (d), (e) iyo (f) ee faqraddan 8 (4) marka la eego cid ama dhammaan dadka kale ee aad u oggolaatay inay helaan macluumaadkaaga ama Xogtaada.
Si looga fogaado shaki, haddii bixinta qaansheegad kasta oo loogu talagalay Kharashka Helitaanka ee la xiriirta mid ka mid ah Xiriiradaada Biilasha, Qorshooyinka Biilka ama mid ka mid ah Ururadaada (sida lagu qeexay faqradda 3) looma sameynin si waafaqsan shuruudaha ku xusan Jadwalka Khidmadda, Zeevou waxaa laga yaabaa: inay joojiso ama joojiso Adeegsigaaga Adeegga, awoodda dhammaan ama mid ka mid ah Ururadaada inay adeegsadaan Adeegga, ama Xuquuqdaada helitaanka dhammaan ama xog kasta.
5. Xuquuqda La Urursaday:
Joojinta Shuruudaan ayaa ah mid aan wax u dhimeynin wax xuquuq iyo waajibaad ah oo dhinacyadu soo urursadeen oo ay ku jiraan taariikhda joojinta. Joojinta Heshiiskan waxaad:
1. inuu mas'uul ka yahay wixii kharash ah iyo qaddarro la uruuriyey oo ku habboon bixinta ka hor ama ka dib joojinta; iyo
2. isla markiiba joojiso adeegsiga Adeegyada iyo Websaydhada.
6. Dhamaad ama joojin:
Faqradaha 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 iyo 11 waxay ka badbaadaan dhicitaanka ama joojinta Shuruudahaan.
9. Caawinta Shaqada
1. Dhibaatooyinka Farsamada:
Xaaladaha dhibaatooyinka farsamada Waa inaad ku dadaashaa dhammaan dadaalada macquulka ah si aad u baartid una ogaatid dhibaatooyinka ka hor intaadan la xiriirin Zeevou. Haddii aad weli u baahan tahay caawimaad farsamo, fadlan hubi taageerada ay ka bixiso khadka tooska ah ee 'Zeevou' ee Websaytka ama haddii aad ku guuldareysato inaad email noogu soo dirto guul@zeevou.com. Zeevou waxay adeegsan doontaa dadaal ganacsi oo macquul ah si ay uga jawaabto dhammaan tikidhada Helpdesk laba (2) maalmood oo shaqo gudahood.
2. Helitaanka adeegga:
In kasta oo Zeevou ay ku talo jirto in Adeegyadu ay diyaar noqdaan 24 saacadood maalintii, toddobo maalmood usbuucii, waxaa suurtagal ah in mararka qaarkood Adeegyada ama Websaydhada aan la heli karin si loogu oggolaado dayactirka ama waxqabadyo kale oo horumarineed inay dhacaan.
Haddii sabab kasta ha noqotee Zeevou ay tahay inay carqaladeyso Adeegyada muddo ka badan intii Zeevou sida caadiga ah ka fili laheyd, Zeevou waxay u adeegsan doontaa dadaal macquul ah si ay ugu daabacdo faahfaahinta howlaha noocan oo kale ah Websaydhka.
Adeegyadu waa inay diyaar noqdaan 95%, oo la cabiraa bil kasta, marka laga reebo ciidaha iyo maalmaha fasaxa ah iyo dayactirka jadwalka ah. Haddii aad codsato dayactir saacadahaas, xisaab kasta oo waqtiga shaqada ama xisaab-dhimista ah ayaa meesha ka saari doonta muddooyinka ay saameysay dayactirkaas. Dheeraad ah, wakhti kasta oo ka dambeeya go'itaanka isku xirnaanta dhinac saddexaad ama yutiilitida ama sababo kale oo ka baxsan xakamaynta Zeevou sidoo kale waa laga saari doonaa xisaab kasta oo noocaas ah. Daawadaada keliya iyo tan gaarka ah, iyo Zeevou mas'uuliyaddeeda oo dhan, ee la xiriirta helitaanka Adeegga waxay noqon doontaa in xilli kasta oo waqti-dhimis ah oo ka badan laba saacadood, Zeevou ay kugu ammaanaan 5% ee khidmadda marin u helka muddo kasta oo ka mid ah 30 ama in ka badan oo daqiiqado isku xigta oo ah xilliyada shaqada; haddii aysan jirin wax ka badan hal deyn noocan oo kale ah ayaa uruuraya maalin kasta. Waqtiga nasashada ayaa bilaabi doona inuu soo uruursado sida ugu dhakhsaha badan Adiga (ogeysiis ku socda Zeevou) aad u garatid in waqtigu ka dhacayo, oo uu sii soconayo illaa inta laga soo celinayo helitaanka Adeegyada. Si loo helo amaahda waqtiga dhimista, Waa inaad ku wargelisaa Zeevou qoraal ahaan 24 saacadood gudahood laga bilaabo wakhtiga goynta, iyo ku guuldareysiga inaad bixiso ogeysiiska noocaas ah waxay waayi doontaa xaqa aad u leedahay helitaanka dhibcaha waqtiga shaqada. Dhibcooyinka noocan oo kale ah laguma soo furan karo lacag ahaan mana noqon doonaan kuwo isugeynaya wax ka badan wadarta dhibcaha hal (1) toddobaad oo ah Khidmadaha Adeeg bil kasta (1) bisha kalandarka dhacdo kasta ha noqotee. Zeevou waxay kaliya codsan doontaa amaah bisha ay dhibaatadu dhacday. Xirnaanshaha Zeevou ee isgaarsiinta xogta ama Adeeg kale iyadoo la raacayo siyaasadeeda ayaan loo qaadan doonin inay ku guuldareysatay Zeevou inay bixiso heerar adeeg oo ku filan Heshiiskan.
10. Codsiyada iyo Qalabka saddexaad
Adeeggu wuxuu ku dhexjiraa ama haddii kale la falgalayaa codsiyada kooxda saddexaad, degellada internetka, iyo adeegyada ("Codsiyada Qaybta Saddexaad") iyo Qalabka saddexaad si ay Adeeggu kuu helaan. Kuwani Codsiyada iyo Qalabka saddexaad waxay yeelan karaan shuruudo iyo shuruudo u gaar ah iyo siyaasadaha asturnaanta iyo Isticmaalkaaga Codsiyada iyo Aaladda Saddexaad ee Saddexaad waxaa xukumi doona oo ku xiran shuruudaha iyo shuruudaha iyo siyaasadaha asturnaanta. Waad fahantay oo aad ogolaatay in Zeevou aysan aqbalin isla markaana aysan mas'uul ka aheyn ama mas'uul ka aheyn dhaqanka, astaamaha, ama waxa ku jira Codsi kasta oo Saddexaad ama Agab ah ama macaamil ganacsi ah Waxaad la geli kartaa bixiyaha wax Codsiyada iyo Aaladda Saddexaad ah. sidoo kale Zeevou ma dammaanad qaadayso waafaqsanaanta ama sii waditaanka waafaqsanaanta Codsiyada iyo Adeegyada Qaybta Saddexaad ee Adeegga.
1. Heshiis dhan:
Shuruudahaan, oo ay weheliso Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Zeevou iyo shuruudaha ogeysiisyada ama tilmaamaha kale ee laguugu siinayo Xeerarkan Adeegga, ayaa beddelaya oo bakhtiinaya dhammaan heshiisyadii hore, wakiillada (ha ahaato mid afka ah ama qoraal ah), iyo faham iyo waxay ka kooban tahay dhammaan heshiiska u dhexeeya Adiga iyo Zeevou oo laxiriira Adeegyada iyo arrimaha kale ee lagula macaamilay Shuruudahaan.
2. Ka dhaafida:
Haddii labada dhinac midkoodna uu ka tanaasulo jebinta shuruudahaan, tani ma noqon doonto ka-tanaasul jebin kasta oo kale. Tanaasuliddu waxba tari mayso qoraal mooyee.
Labada dhinac midkoodna mas'uul kama noqon doono dib-u-dhac kasta ama ku-guul-darreysiga gudashada waajibaadkiisa iyadoo la raacayo Shuruudahaan haddii dib-u-dhaca ama guuldaradu ay sabab u tahay sabab kasta oo ka baxsan awooddeeda macquul ah. Qodobkan ma khuseeyo waajib kasta oo ah inuu lacag bixiyo.
4. Meeleyn la'aan:
Ma ku wareejin kartid ama ku wareejin kartid wixii xuquuq ah qof kale adiga oo aan oggolaansho qoraal ah oo hore ka haysan Zeevou.
5. Xukunka sharciga iyo awooda:
Haddii aad tahay canshuur degan Mareykanka ama macluumaadka ama Macluumaadka Aad kuheleyso adoo adeegsanaya Adeegyada iyo Websaydhku waa mid kaliya oo ah qof canshuur deganaansho ku leh Mareykanka Mareykanka waqtiga aad aqbasho kuwan shuruudaha markaa sharciyada Gobolka Kalifoorniya, USA ayaa xukumaya Heshiiskan iyo Zeevou iyo Adiguna waxaad ku raacsan tahay in Nidaamka Xallinta Khilaafaadka Mareykanka ee hoos lagu sharraxay uu khuseeyo dhammaan khilaafaadka ka dhashay ama la xiriira heshiiskan ama si kasta oo la xiriira Adeegga - FADLAN HADAAD U AKHRISO Habka Xallinta Khilaafaadka Mareykanka Si taxaddar leh maadaama ay u baahan tahay ISTICMAALKA QABYAALAD KU SAABSAN SALSAN QOF OO LOO XALIYO KHILAAFADKA, LAGA HELI KARO TIJAABOOYINKA XUKUUMADDA AMA FALALADA FASALKA, OO SIDOO KALE XUDUUDAHA KHUDBADAHA INAAD HELI KARTO. Haddii macluumaadka ama Xogta aad ku helayso adoo adeegsanaya Adeegyada iyo Websaydhadu ay keli ku tahay qofka deggan cashuurta New Zealand waqtiga aad Aqbalayso shuruudahan markaa sharciga New Zealand ayaa xukumaya Heshiiskan Adiguna waxaad u gudbineysaa awoodda gaarka ah maxkamadaha New Zealand wixii khilaafaad ah ee ka dhasha ama ku lug leh heshiiskan. Haddii macluumaadka ama Macluumaadka Aad ku helayso adoo adeegsanaya Adeegyada iyo Websaydhadu ay keli ku tahay qofka deggan cashuurta ee Australiya waqtiga aad Aqbalayso shuruudahaas markaa sharciga Australiya ayaa xukumaya Heshiiskan Adiguna waxaad u gudbineysaa xukunka gaarka ah ee maxkamadaha Australia wixii khilaafaad ah ee ka dhasha ama la xiriira Heshiiskan. Xaaladaha kale oo dhan Heshiiskan waxaa xukuma sharciyada Jersey adiguna waxaad u gudbineysaa awoodda gaarka ah ee maxkamadaha Jersey dhammaan khilaafaadka ka dhasha ama la xiriira Heshiiskan.
Haddii qayb ka mid ah ama qodobbada Shuruudahaas ay yihiin kuwo aan ansax ahayn, aan la fulin karin ama khilaafsan sharciga, qaybtaas ama qodobka waxaa lagu beddelay qodob kaas oo, intii suurtagal ah, fulisa ujeeddada asalka ah ee qaybtaas ama bixinta. Inta ka hartay Heshiiskan ayaa waajib ku ah dhinacyada.
Ogaysiis kasta oo lagu bixiyo shuruudahan dhinac kasta oo ka socda kan kale waa inuu ahaadaa mid qoraal ahaan emayl ah waxaana loo qaadan doonaa in lagu siiyay gudbinta. Ogeysiisyada loo dirayo Zeevou waa in loo diraa guul@ zeevou.com ama cinwaan kale oo e-mayl ah oo lagu soo ogeysiiyo adiga oo ah Zeevou. Ogeysiisyada Adiga ayaa laguugu soo diri doonaa cinwaanka emaylka ee aad bixisay markii aad dejinaysay Helitaankaaga Adeegga ama, haddii ay dhacdo inaad markaa kadib cusboonaysiiso tan, cinwaanka emaylka ugu weyn ee ku xiran koontadaada barta ogeysiiska la soo saaray.
8. Diidmada Dammaanadda:
WAAD FAHAN TAHAY OO AAD KU HESHIISAY IN ADEEGGA LA SIIYO "SIDUU YAHAY" IYO "SIDA LOO HELI KARO," OO AADAN LAHAYN TAHRIIB AMA SHARCIYO LAGU SHAQAYNAYO AMA XAALAD KASTA OO NOOC AH. ZEEVOU IYO DHAMMAAN MADAXDA JOOGTU WAXAY KA SAMEEYAAN WAKIILADO ANA KA DIIDAYN KASTA DARAJOOYIN AMA SHURUUDAHA KU QANACSAN TAYO, SHAQAYN, UJEEDDO UJEEDO GAAR AH, AMA AAN KU xadgudub ahayn. ZEEVOU AMA CID LAHAYN Milkiilaha DIIWAAN-GELINTA SHAQAALAHA AH EE ADEEGGA KA BILAASHO MALWARE AMA KALA-DHAQAALAHA KALE EE XUN. Waxaa intaa dheer, ZEEVOU AYAAN WAKIIL AHAYN AMA DARNAAN MA AHA, WARBIXIN, DAMMAAN, AMA MAS'UULIYADDA LAGU QAADO CODSIYADA XISBIGA SADDEXAAD (AMA QOFKA KU JIRA), WAXYAABAHA LA ISTICMAALO, QIIMAYNTA AMA SOO SAARKA SOO SAARKA AMA ADEEGA ADEEGA AMA SHAQO CULUS OO LOOGU TALAGALAY, AMA LOOGU TALAGALAY QOF KASTA OO XANUUNSAN AMA XAYYAALIN KALE OO ZEEVOU MA AHA INA LAGU SAMEEYO AMA LAGU SAMEEYO KASTA OO ISKU DHIIBTA ADEEGA IYO SADDEXAAD EE BIXIYAYAASHA.
TALO IYO MACLUUMAAD MID AMA AMA QORAAL AH OO AAD KA HELI KARTO ZEEVOU WAA IN AY SAMAYSAN KARAAN HAL KAMID AH BADBAADADA ZEEVOU. INTA AAD ISTICMAALAYO ADEEGGA, WAA LAGA HELI KARAA INTA LAGU BAHDALO MUUQAALADA SIFAYNTA MUUQAALKA, LAAKIIN ISTICMAALKA QAYBAHAN AYAA WELI KA SOO BAXI DOONA QAYBTA KHARASHKA EE LAGU SHAQAYNAYO ADIGUNA WAA IN AAD KU AADAN INAAD KU BAAHAN TAHAY IN LAGU SAMEEYO DHAMMAAN DHAMMAAN.
OO AAN LAGU XADDIDNAYN HORUDHACA, WAXYAABAHA QEYBTAAN LOOGU SAMEEYNAYNO XADAYNTA SHAQAALAHA ZEEVOU DHACDADA ISKU-DARKA AMA QAAB-KA-SAMAYNTA QAYBTA AMA BULSHADA AQOONSIGA AH EE LOO SOO GUDBIYO ADEEGA. QAYBTAAN WUXU UU SHAQAYSAA INTII UGU DANBEEYSAY EE AY OGOLAATO SHARCIGA LA SHAQAYN KARO.
QAYBTAAN MA SAXAYNAYA XUQUUQDAADA QAAR-BIXINTA OO AH SIDA AAD IIBSADAY.
9. Waxyaabo kala duwan:
Zeevou way wareejin kartaa oo ku wareejin kartaa wixii xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda ah ee ku xusan Heshiiskan ogolaansho la'aan. Heshiiskani waa bayaan dhammaystiran oo gaar ah oo ku saabsan isfahamka labada dhinac iyo kii ka horreeyay iyo kansal gareeya dhammaan heshiisyadii hore ee qoraalka iyo afka, isgaarsiinta iyo fahamka kale ee la xiriira mawduuca Heshiiskan, iyo in dhammaan cafiska iyo wax ka beddelka ay ahaadaan qoraal. saxiixeen labada dhinac, marka laga reebo sida kale ee halkan ku xusan. Ma jiro hay'ad, iskaashi, shirkad wadaag ah, ama shaqo loo abuuray heshiiskan dartiis macmiilkuna ma lahan wax awood ah noocuu doono ha ahaadee oo uu ku xiro shirkadda si kasta oo ay doonto ha noqotee.
10. Xuquuqda dhinacyada saddexaad:
Qofka aan qayb ka ahayn Shuruudahaan xaq uma lahan inuu ka faa'iideysto ama uu dhaqan geliyo xilli kasta oo ka mid ah Shuruudahaan.
11. Shuruudaha dheeraadka ah ee Mareykanka
Haddii aad tahay canshuur degan Mareykanka ama macluumaadka ama Macluumaadka Aad kuheleyso adoo adeegsanaya Adeegyada iyo Websaydhku waa kaliya midka qofka canshuurta ku nool Mareykanka Mareykanka, shuruudaha soo socda ee soo socda ayaa lagu dabaqayaa:
Zeevou looguma talagalin adeegsiga macaamiisha (yacni, adeegsi shaqsiyeed, reer ama dano qoys).
Habka Xallinta Khilaafaadka Mareykanka
FADLAN SI AAD U AKHRISO - WUXUU KU SAAMEEyaa XUQUUQDAADA.
Nidaamka Xallinta Khilaafaadka Mareykanka ee soo socda ayaa khuseeya dadka deggan canshuuraha ee Mareykanka Mareykanka, ama haddii macluumaadka ama Macluumaadka Aad kaheleyso adoo adeegsanaya Adeegyada iyo Websaydhadu ay yihiin kuwa qof degenaansho canshuur ka ah Mareykanka Mareykanka Waqtiga aad aqbasho shuruudahaan ama haddii aad si kale u dooneysid inaad ku xalliso khilaaf ka taagan Mareykanka Haddii aad tahay canshuur deggan Mareykanka Mareykanka ama macluumaadka ama Macluumaadka Aad ku helayso adoo adeegsanaya Adeegyada iyo Websaydhku waa qofka waa canshuur deganaansho ku nool Mareykanka Mareykanka waqtigaas oo Aad aqbasho shuruudahaan, Waxaad ku raacsan tahay Zeevou sida soo socota:
a. Soo Koobid:
Inta badan tabashooyinka macaamiisha si dhakhso leh ayaa loo xalin karaa isla markaana macaamiisha ku qanacsan tahay iyaga oo email ugu dira kooxdayada khibrada macaamiisha guul@ zeevou.com. DHACDOOYINKA AAN LOO QAADANAYN IN KOOXDA KHIBRADAYNTA MACAAMIIRU AAN AWOOD U LAHAYN INAAD XALISO CABASHO AAD KA HELI KARTO QANCISKAAGA (AMA HADII AANAN AWOOD U LAHAYN INAAD XALISO KHILAAFKA AAN IDIN LEEYAHAY INTA AAN ISKU DAYNO IN AAD SI XUL AH U DHIGTO) KHILAAFADAN KU SAABSAN XIRITAANKA XUKUNNIMO AMA YAR SHEEGASHADA MAXKAMADDA INTA LOOGU TALAGALAY MAXKAMADAHA GUUD EE GUUD. Garqaadiddu waa mid aan rasmi ahayn marka loo eego dacwadda maxkamadda ka socota. Gar qaadiddu waxay isticmaashaa garqaade dhexdhexaad ah halkii ay ka noqon lahayd garsoore ama xeerbeegti, waxay u oggolaaneysaa helitaan ka xaddidan kan maxkamadda, waxayna ku xiran tahay dib u eegis aad u kooban oo ay qaadaan maxkamaduhu. Gar-qaadayaasha ayaa bixin kara isla mag-dhawga iyo gargaarka ay maxkamaddu bixin karto. XADGUDUB KASTA OO HESHIISKAN KA QEYBGALAYA AYAA SALSAN SHAQSIYAD; WAA KUGU RAACSAN TAHAY ZEEVOU IN AAN LOO OGOLAADNAYN XAFLADAHA FASALADA IYO FICILADA FASALADA. Wixii sheegasho aan macquul ahayn oo aan ka badnayn $ 10,000, Zeevou waxay bixin doontaa xaraynta AAA, kharashyada maamulka iyo garqaadeyaasha. Intaa waxaa sii dheer, dhex dhexaadinta Waxaad xaq u leedahay inaad ka soo ceshato khidmadaha qareenka magaalada Zeevou ugu yaraan isla heerka aad ku jiri laheyd maxkamadda.
Waxa kale oo aad ku xareysan kartaa cabasho barta internetka ee xalinta khilaafaadka kale (ODR-platform). Waxaad ka heli kartaa barnaamijka 'ODR-platform' iyada oo loo marayo isku xidhka soo socda: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.
b. Habka Xallinta Khilaafaadka Mareykanka.
KHILAAF AMA sheegasho kasta oo la xiriirta dariiq kasta oo loo maro ADEEGA AMA HESHIISKAN waxaa lagu xallin doonaa xiritaanka xiritaanka, HALKAN MAXKAMADDA, marka laga reebo inaad adigu sheegan kartid maxkamadda sheegashooyinka yaryar haddii sheegashooyinkaagu u qalmaan. Sharciga Xalinta Khilaafaadka ee Faderaalka ayaa xukuma turjumaada iyo dhaqan galinta qodobkaan; garqaadaha ayaa u adeegsan doona sharciga California dhammaan arrimaha kale. Iyadoo aan loo eegin wax kasta oo lid ku ah, dhinac kasta oo ka mid ah gar-qaadistu wuxuu wakhti kasta raadin karaa amarro ama noocyo kale oo gargaar siman oo ka yimaada maxkamad kasta oo awood u leh. WAAN ISKU RAACNAY IN WIXII KHASOO OO KHILAAF AH LOO KASOO DHIGO XUQUUQDA AQBALADA EE XISBIYADA OO AAN LAHAYN XUBNAHA CILAACA AMA FASALADA EE KASTA OO LOOGU SOO SAARAY FASALO AMA Wakiil. ADIGA OO GALAYA HESHIISKAN OO AAD KU RAACSAN TAHAY IN LAGU QAADO, waxaad ku raacsan tahay ZEEVOU INAAD IYO Zeevou aad midba midka kale ka sugeyso xaqa aad u leedahay inaad ku buuxiso dacwad sharci ah iyo xaqa aad u leedahay in aad ku tijaabiso maxkamad. DHEERAAD AH, WAAD KUGU HESHIISAY Zeevou INAAD KA TAGO XUQUUQDA INAAD KA QAYBQAATO FICILKA FASALKA AMA LOOGU TALAGALAY SALDHIGA FASALKA. WAA KUGU RAACSAN TAHAY Zeevou IN AAD SI CAD AH UGU OGTAHAY INAAD KA TAGTAY XUQUUQDAAN.
Si aad u bilowdo dacwada gar qaadid, u dir warqad codsi heshiisiin ah oo aad ku sifeyneyso dalabkaaga Zeevou Limited, PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey, JE4 0ZE, Channel Islands. Xalinta Khilaafaadka waxaa qaban doona Ururka Xalinta Khilaafaadka Mareykanka (AAA) ka hor hal garqaade AAA oo hoos yimaada qawaaniinta AAA, kuwaas oo laga heli karo www.adr.org ama la soo wacayo 1-800-778-7879. Bixinta dhammaan xareynta, khidmadaha maamulka iyo garqaadeyaasha iyo kharashyada waxaa xukumi doona qawaaniinta AAA. Intaas waxaa sii dheer, Zeevou waxay dib u bixin doontaa khidmadahaas iyo kharashaadka sheegashooyinka guud ahaan ka yar $ 10,000 illaa gar-qaadaha uu go'aamiyo sheegashooyinka inay yihiin kuwo aan fiicnayn. Sidoo kale, Zeevou ma dalban doonto qarashka qareenkeeda ama kharashaadka ay ku kala garqaadaan ilaa gar-qaadahu go'aansado Sheegashadaada ama difaacaagu waa wax aan macquul ahayn. Waad ku raacsan tahay Zeevou in Adiga ama Zeevou aad dooran kartaan in heshiisiinta lagu qabto taleefan ama ku saleysan gudbinta qoraal ah. Waad ku raacsan tahay Zeevou in shaqsi ahaan garqaad lagu sameeyo degmada aad degan tahay ama meel kale oo la isla oggol yahay. Waad ku raacsan tahay Zeevou in go'aanka garqaadaha uu noqon doono mid kama dambeys ah oo aan rafcaan laga qaadan karin, xukunka ku saabsan abaalmarinta heshiisiinta waxaa loo gudbin karaa maxkamad kasta oo awood u leh. Waxaad ku raacsan tahay Zeevou in Nidaamka Xallinta Khilaafaadka Mareykanka uu ka badbaadi doono dhicitaanka, joojinta ama baabi'inta Heshiiskan.
12. Nala soo xiriir
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Adeegga ama Heshiisyada, fadlan la xiriir Adeegga Macaamiisha Zeevou adoo booqanaya qaybta nagu Saabsan ee degelkeenna.
Waad ku mahadsantahay akhrinta Shuruudahayaga. Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysaneyso Zeevou!
Waxyaabaha qandaraaska lagu siinayo: Zeevou Limited
Addendum-ka Kontroller-to-Controller ("CCA"), wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah Terms of Service, ("Heshiiska") u dhexeeya Zeevou Limited ("Zeevou") iyo Adiga ("Macaamiil"). Dhinacyadu waxay qirayaan inay iyagu yihiin mid kasta oo gaar u ah oo Maamula Xog kasta oo Shakhsiyeed. Dhinacyadu ma sameyn doonaan mana sameyn doonaan Macluumaadka lagu daray oo ah wada ilaaliyeyaal wadajir ah. Dhinac kastaa wuxuu u hoggaansamayaa waajibaadka ku quseeya iyada oo ah Maamulaha hoos yimaada GDPR, Xisbi walbana wuxuu si gaar ah iyo gooni gooni ah mas'uul uga noqon doonaa u hoggaansamiddiisa.
1. MACLUUMAADKA QOFKA EEA
“Ujeeddooyin Lagu Heshiiyey”: Waxaa loola jeedaa adeegsiga Adeegga Zeevou ee ay qabanayso Macaamiil (sida waafaqsan heshiiska) sida uu oggol yahay Sharciga Ilaalinta Macluumaadka ee Zeevou ay ku siineyso helitaanka Xogta Shakhsiyeed ee Wadaagga ah (sida hoos lagu qeexay) marka Macaamilku adeegsanayo Adeegga Zeevou.
"Sharciga Ilaalinta Macluumaadka": Waxaa loola jeedaa dhammaan sharciyada asturnaanta iyo ilaalinta macluumaadka oo ay ku jiraan Xeerka Ilaalinta Xogta Guud ("GDPR") iyo wixii sharci qaran ee fulineed ee khuseeya, xeerarka iyo sharciga labaad ee Midowga Yurub (iyo Boqortooyada Midowday) haddii aysan hadda sii jirin Qeyb ka mid ah Midowga Yurub) oo la xiriirta ka shaqeynta xogta shaqsiyeed iyo asturnaanta isgaarsiinta elektarooniga ah, sida wax looga beddelay, loo beddelay ama loo cusbooneysiiyey waqti ka waqti, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn Qarsoodiga iyo Dardaaranka Isgaarsiinta Elektarooniga ah (2002/58 / EC), Asturnaanta iyo Isgaarsiinta Elektarooniga ah (Dardaaranka EC) Xeerarka 2003 (SI 2003/2426), iyo Xeerka Ilaalinta Macluumaadka 2018.
"Xogta Shakhsiyeed ee EU": waxaa loola jeedaa xogta shakhsiga ah ee laxiriira maaddooyinka xogta ee kuyaala Aagga Dhaqaalaha Yurub (oo ay kujiraan Boqortooyada Midowday sida taariikhda CCA) oo ay farsameyso Zeevou oo keliya iyadoo wakiil ka ah Macaamiisha ujeedada bixinta Adeegga Zeevou.
"Kuwa La Oggolaaday": Waxaa loola jeedaa dhinacyada heshiiska iyo Isticmaalayaasha.
"Xog Wadaag Shakhsiyeed": waxaa loola jeedaa xogta shakhsiga ah ee lagu daray Adeegga Zeevou ee Zeevou lala wadaagay Macaamilka. Si looga fogaado shaki, Xogta Shakhsiyeed ee La Wadaago kuma jiri doono Xogta Shakhsiyeed ee EU, Macluumaadka Isticmaalaha, Xusuus-qorrada ama xog shakhsiyeed kale.
"Adeegga Zeevou": waxaa loola jeedaa softiweerka maareynta martigelinta ee ay u diyaarisay Zeevou Macaamiisha.
"Isticmaalaha": waxaa loola jeedaa shaqaale ama la-taliye Macaamiil oo ay gacanta ku hayaan Macaamiil loona oggolaaday inuu u adeegsado Adeegga Zeevou si waafaqsan shuruudaha Heshiiska
"Macluumaadka Isticmaalaha": waxaa loola jeedaa Xogta Shakhsiyeed ee EU ee Isticmaalayaasha.
1.2 Wadaagista Xogta Shakhsiyeed. Qeybtan 1 waxay dejineysaa qaab-wadaagida macluumaadka shakhsiga ah ee Zeevou loogu talagay Macaamiil ahaan maamule ahaan. Dhinac kastaa wuxuu qirayaa in Xogta Shakhsiyeed ee La Wadaago kaliya loo wadaagi doono Ujeeddooyinka Lagu Heshiiyey. Waajibaadka iyo waajibaadka saaran Zeevou ee hoos timaada Qeybtan 1 ma khuseyn doonto wax-qabad kasta oo Macaamil kaas oo ka baxsan baaxadda Ujeeddooyinka Lagu Heshiiyey.
1.3 Saamaynta u hogaansanaan la'aanta sharciyada Ilaalinta Macluumaadka. Dhinac kastaa wuxuu u hoggaansamayaa dhammaan waajibaadka lagu soo rogay kantaroole sida ku xusan Sharciga Ilaalinta Macluumaadka, iyo jebinta walxaha kasta ee Sharciga Ilaalinta Macluumaadka ee dhinac ka mid ah waa, haddii aan lagu xallin muddo shan iyo toban maalmood gudahood ah ogeysiis qoraal ah oo ka socda dhinaca kale, wuxuu siinayaa sababo dhinac kale inuu joojiyo Heshiiska isla markaaba dhaqan galo.
1.4 Wareejinta xadka. Dhinacyadu waxay halkan ku galayaan Heerarka Heshiiska Heerarka ee kontaroolayaasha sida ay ku ansixiyeen Guddiga Yurub ee Go'aanka 2004/915 / EC, oo halkan ku lifaaqan sida Bandhigga A ("SCCs") waxayna sameeyeen qayb ka mid ah Heshiiska guud ahaan.
1.5 Waajibaadka macaamiisha. Macaamiilku waa inuu:
(i) socodsiinta Xogta Shakhsiyeed La Wadaago kaliya Ujeedada Lagu Heshiiyey ama (ii) hubiyo inay leedahay dhamaan ogaysiisyada iyo ogolaanshaha meesha si ay awood ugu yeelato habsami u socodsiinta Xogta Shakhsiyeed ee Wadaagga ujeeddo kasta oo aan ahayn ujeeddooyinka lagu heshiiyey iyadoo la raacayo xogta Shuruucda Badbaadinta iyo haddii kale u hoggaansamaan dhammaan sharciyada khuseeya ee la xiriira howshaas;
ma siidayn karo ama u oggolaan maayo helitaanka Xogta Shakhsiyeed ee La Wadaago cid kale oo aan ahayn Dadka Qaata Ogolaanshaha;
in la hubiyo in dhammaan qaatayaasha la oggol yahay ay ku xiran yihiin waajibaad qoraal ah oo qoraal ah (marka laga hadlayo Isticmaalayaasha, illaa inta waajibaadka noocaas ah lagu soo rogi karo shakhsiyaadka) ee ku saabsan Xogta Shakhsiyeed ee La Wadaago (oo ay ku jiraan waajibaadka sirta) oo aan ka yareyn kuwa ay ku soo rogeen Qeybtan 1;
hubiyo inay haysato tallaabooyin farsamo iyo abaabul oo habboon, oo dib loo eegay oo ay oggolaatay Zeevou, haddii si macquul ah loo codsado, si looga ilaaliyo ka shaqeynta xogta shakhsiga ah ee aan loo igman ama sharci-darrada ah iyo ka-hortagga shilka ama burburka, ama dhaawaca, xogta shakhsiga ah;
ha u gudbin wixii xog shakhsi ah ee laga helo Zeevou ee ka baxsan EEA ilaa Macaamiilku hubiyo in (i) u gudbinta ay tahay wadan ay ansixiyeen Komishanka Yurub iyagoo bixinaya ilaalin ku filan iyadoo la raacayo Qodobka 45 ee GDPR (ii) waxaa jira ilaalin habboon oo ku habboon meesha iyadoo la raacayo illaa Qodobka 46aad ee GDPR; ama (iii) mid ka mid ah sharafta xaaladaha gaarka ah ee Qodobka 49 ee GDPR ayaa khuseeya wareejinta; iyo
tirtir (bixinta qoraal xaqiijin ah oo baabi'in ah) ama ku soo celi Xogta Shakhsiyadeed ee Wadaagga ah iyo nuquladeeda Zeevou lixdan (60) maalmood gudahood ka dib dhammaadka bixinta Adeegga Zeevou ee Macaamiisha, iyo / ama wakhti kasta oo la codsado Zeevou illaa ay u baahdaan sharci lagu kaydiyo xogta shakhsiga ah, isla markaana toos loo farayo cid kasta oo saddexaad oo Macaamilku la wadaago Macluumaadka Shakhsiyeed ee Wadaag si dhakhso leh looga tirtiro macluumaadka shakhsiyadeed ee la wadaagay
ha siidayn ama u siidaynin wax Xog ah Shakhsiyeed oo Wadaag ah iyada oo laga jawaabayo codsi marin u hel mawduuc xog ah iyada oo aan marka hore lala tashan Zeevou meel kasta oo suurtagal ah;
si dhakhso leh ugu wargali Zeevou wixii ku saabsan helitaanka wixii macluumaad ah ee ku saabsan helitaanka mawduucyada macluumaadka si waafaqsan Cutubka III ee GDPR ("codsiga marin u helista mawduuca");
ogeysiin Zeevou iyada oo aan dib u dhigis aan loo baahnayn ka helin ka warqabka xadgudub kasta ama jebinta Sharciga Ilaalinta Macluumaadka, iyada oo la bixinayo in bixinta ogeysiiskaas aan loo macnayn doonin qirasho khalad ama mas'uuliyad ah oo la xiriirta xadgudub kasta ama jebin noocaas ah; iyo
Hayso diiwaanno iyo macluumaad dhameystiran oo sax ah si ay u muujiso u hoggaansamideeda Qeybtan 1.
1.6 Caawinaad wadaag ah. Dhinac kastaa wuxuu ka caawin doonaa kan kale u hoggaansamida dhammaan shuruudaha ku habboon ee Sharciga Ilaalinta Macluumaadka ee la xiriira Macluumaadka Shakhsiyeed ee Wadaagga ah. Gaar ahaan, xisbi kasta waa inuu:
in ay siiso dhinaca kale kaalmo ganacsi oo macquul ah si ay ugu hoggaansamaan codsi kasta oo marin u helid ah; iyo
siiyaan dhammaan kaalmaynta xagga ganacsiga ee macquul ah dhinaca kale, iyadoo ay ku kacayso kharashka dhinaca kale, si looga jawaabo codsi kasta oo uga yimaada mawduuc xog iyo hubinta u hoggaansamida waajibaadkeeda ee hoos timaada Sharciga Ilaalinta Macluumaadka ee la xiriira amniga, ogeysiisyada jebinta, qiimeynta saameynta iyo la-tashiyada, iyo codsiyada ka yimid, mas'uuliyiinta kormeerka ama maamulayaasha.
Zeevou waxay xaq u leedahay inay adiga kugu dalacdo wixii caawimaad ah ee la bixiyo ee u hogaansanaanta codsiyada gelitaanka mawduuca.
1.7 Codsiyada Helitaanka Mawduuca. Haddii Macaamilku u gudbiyo Zeevou codsi marin u helid ah macluumaadka la ururiyey oo ay hayaan Adeegga Zeevou ee Macaamiisha, tan waxaa lagu bixin doonaa qiimo macquul ah Zeevou 30 maalmood gudahood laga soo bilaabo markii codsiga la helay. Zeevou waxay ubaahan kartaa Macaamilka inuu raaco hanaan qaas ah si uu ula soo baxo xogta, faahfaahintiisa kaas oo ay u soo bandhigi doonto Macaamiisha Zeevou barta baaritaanka.
1.8 Xog Macmiilku la Wadaagay Adeegga Zeevou. Macluumaad kasta oo Macaamilku la wadaago Adeegga Zeevou, sida laakiin aan ku xaddidnayn macluumaadka ku saabsan diiwaangelinta khiyaanada suurtagalka ah, waxaa isticmaali kara Zeevou oo loo qaybiyey marti-geliyeyaasha kale iyadoo la adeegsanayo Adeegga Zeevou.
2. Indemnification. Macaamiilku waa inuu magdhabaa, difaacaa oo haystaa Zeevou oo aan dhib lahayn, la-hawlgalayaasheeda, saraakiisheeda, agaasimayaasha, shaqaalaha iyo wakiillada wixii sheegashooyin ah, ficillada, dacwadaha, kharashyada, khasaaraha, khasaaraha iyo deymaha (oo ay ku jiraan xaddidnaanta baaritaannada dawladda, cabashooyinka iyo ficillada) iyo qareenno macquul ah. 'khidmadaha la xiriira ama ka dhashay ku xadgudubka Macaamiil ee CCA. Iyadoo aan loo eegin wax kasta oo lid ku ah Heshiiska, waajibaadka magdhowga Macaamiisha ee ku xusan Qeybtan 2 laguma xaddidi doono xaddidaadyo mas'uuliyadeed oo lagu sheegay Heshiiska.
3. Isdhaxgalka. CCA-du waxay ka dhigan tahay wax ka beddelka Heshiiska. CCA-daan, oo ay ku jiraan SCC-yada, iyo Heshiiska ayaa ka kooban dhamaan heshiisyada dhinacyada iyo isfahamka la xiriira mowduuca halkan ku xusan. Waajibaadka Zeevou ee ku jira CCA-kan waxay kuxirantahay xadeyn kasta oo mas'uuliyadeed ah oo lagu sheegay Heshiiska. Waajibaadka ku jira CCA-daan waxaa sii dheer waajibaadka kale ee ku jira Heshiiska. Haddii ay dhacdo isku dhac u dhexeeya CCA-daas iyo wixii kale ee heshiis ah, shuruudaha CCA-da ayaa xukumi doona. Si looga fogaado shaki, illaa iyo inta uu Heshiisku ka reebayo nooc kasta oo macluumaad ah waajibaadka sirta, ka-reebitaannadaas ayaan lagu dabaqi doonin Xogta Shaqsiga ee EU.
4. Dhisme. CCA-daan, ilaa ujeeddo cad oo liddi ku ah mooyee aysan u muuqan: (a) meel aan ka hor imaanaynin macnaha guud, ereyada loo adeegsaday xilligan xaadirka ah waxaa ka mid ah waqtiga mustaqbalka iyo kan kale iyo ereyada ku jira tirada jamaca waxaa ku jira lambarka kelida ah iyo kan kale; (b) tixraaca qof kasta oo ay kujirto qofka noocan ah dhaxalkiisa iyo shaqooyinkiisa laakiin, hadii ay khuseyso, kaliya hadii dhaxalka iyo meeleynta noocaas ah aysan mamnuucin CCA; (c) tixraaca jinsi kasta oo ka mid ah jinsiga kale; (d) tixraac heshiis kasta, dukumiinti ama qalab macnaheedu waa heshiis noocaas ah, dukumiinti ama qalab sida wax looga beddelay ama wax looga beddelay isla markaana dhaqangalaya waqti ka waqti iyada oo la raacayo shuruudaha iyada oo ay ku jiraan dhammaan addenda, bandhigyada iyo jadwalka ku jira; (e) cinwaanada iyo cinwaanada hoose ee loo isticmaalay CCA-kan waxaa loo isticmaalaa oo keliya sahlanaanta mana loo tixgelinayo sameynta ama tarjumaadda CCA; (f) “halkan,” “halkan,” “halkan,” iyo ereyada la mid ah soo dejinta waxaa loo tixgelin doonaa tixraacyo CCA-da guud ahaan oo aan loo tixgelinaynin Qeyb ama Qayb hoosaad gaar ah ee CCA; iyo (g) “oo ay ku jiraan” (iyo macno wada jir ah, “ku dar”) waxaa loola jeedaa ka mid ahaanshaha iyada oo aan la xadidayn guud ahaanta sharraxaad ka horreysa ereygan oo kale.
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay May 31st, 2019.
Heerarka heshiiska qandaraaska ee wareejinta xogta shakhsiga ah ee Beesha ilaa waddamada saddexaad (xakamaynta wareejinta xakamaynta)
Heshiiska wareejinta xogta
Zeevou, Inc. (hada kadib "dhoofiyaha xogta")
Macaamiil (hadda kadib "soo dejiyaha xogta")
mid walbana "xisbi"; wadajir "xisbiyada".
“Xogta shakhsiga ah”, “qaybaha gaarka ah ee xogta / xogta xasaasiga ah”, “habka / ka shaqeynta”, “kantaroolaha”, “processor”, “maadada xogta” iyo “maamulka kormeerka / maamulka” waxay lahaan doonaan macno isku mid ah sida ku xusan Amarka 95 / 46 / EC ee 24 Oktoobar 1995 (oo ah "awoodda" macnaheedu waa hay'adda ilaalinta xogta karti u leh ee ku taal dhulka ay ka dhisan tahay dhoofiyaha xogta);
“Dhoofiyaha xogta” waxaa loola jeedaa kantaroolaha wareejiya xogta shaqsiga ah;
“Soo dejiyaha xogta” waxaa loola jeedaa kantaroolaha ogolaaday inuu ka helo xogta shakhsiyadeed dhoofiyaha xogta shaqsiyeed si loo sii wado iyadoo la raacayo shuruudaha qodobadan isla markaana aan ku xirnayn nidaamka waddan saddexaad oo hubinaya ilaalin ku filan;
“Qodobada” waxaa loola jeedaa qodobadan qandaraaska, oo ah dukumiinti madax-bannaan oo aan ku darsanayn ereyada ganacsi ee ganacsi ee ay dhisteen dhinacyadu iyadoo loo marayo nidaamyo ganacsi oo gaar ah.
Faahfaahinta wareejinta (iyo sidoo kale macluumaadka shaqsiyeed ee la daboolay) waxaa lagu qeexay Lifaaqa B, oo ka dhigaya qayb muhiim ah qodobbada.
I. WAAJIBAADKA SAFARKA MACLUUMAADKA
Dhoofiyuhu xogta wuu dammaanad qaadayaa oo wuxuu qaadayaa:
Xogta shaqsiyadeed waa la soo aruuriyay, laga shaqeeyay loona wareejiyay si waafaqsan sharciyada khuseeya dhoofiyaha xogta.
Waxay adeegsatay dadaal macquul ah si loo ogaado in soo dejiyaha xogta uu awood u leeyahay inuu ku qanco waajibaadkiisa sharci ee qodobadan hoos ku xusan.
Waxay siin doontaa soo dejiyaha xogta, markii sidaas la codsado, nuqulo ka mid ah sharciyada ilaalinta xogta khuseeya ama tixraacyada iyaga (halka ay khuseyso, oo aan ku jirin la-talinta sharci) ee waddanka ay ka dhisan tahay dhoofiyaha xogta.
Waxay ka jawaabi doontaa su'aalaha ka yimaada mowduucyada xogta iyo maamulka ku saabsan ka shaqeynta xogta shakhsiga ee soo dejiyaha xogta, ilaa dhinacyadu ku heshiiyaan in soo dejiyaha xogta uu ka jawaabi doono, markaas oo xogta dhoofiyaha ay wali ka jawaabi doonto ilaa inta macquul ah iyadoo macluumaadka si macquul ah loo heli karo haddii soo dejiyaha xogta uusan rabin ama uusan awoodin inuu ka jawaabo. Jawaabaha waxaa lagu bixin doonaa waqti macquul ah gudahood.
Waxay diyaarin doontaa, marka la codsado, nuqul ka mid ah qodobbada mawduucyada xogta ee ka-faa'iideystayaasha qaybta saddexaad ee ku xusan faqradda III, haddii qodobbada ay ku jiraan macluumaad sir ah, haddii ay dhacdo laga yaabo inay ka saarto macluumaadkaas. Meesha laga saarayo macluumaadka, dhoofiyaha xogta waa inuu qoraal ahaan ugu wargaliyaa maadooyinka xogta sababaha looga kaxeystey iyo xaqa ay u leeyihiin inay u soo jiidaan raritaanka hey'adda. Si kastaba ha noqotee, dhoofiyaha xogta waa inuu u hoggaansamo go'aanka hay'adda ee ku saabsan helitaanka qoraalka buuxa ee qodobbada maadooyinka xogta, illaa iyo inta mawduucyada xogta ay oggolaadeen inay ixtiraamaan sirta macluumaadka sirta ah ee laga saaray. Dhoofiyuhu wuxuu sidoo kale siinayaa nuqul ka mid ah qodobada maamulka hay'addii loo baahdo.
II. WAAJIBAADKA SOO SAARAHA MACLUUMAADKA
Xogta soo dejiyaha xogta ayaa dammaanad qaadaysa oo fulinaysa:
Waxay lahaan doontaa tallaabooyin farsamo iyo abaabul oo habboon si loo ilaaliyo xogta shakhsiga ah ee ka timaadda burburka shilalka ama sharci-darrada ah ama luminta shilka, beddelaadda, shaacinta aan la fasaxin ama marin u helka, iyo taas oo bixisa heer nabadgelyo oo ku habboon halista metelaysa howsha iyo nooca xogta la ilaalinayo.
Waxay lahaan doontaa nidaamyo meesha yaal si cid kastoo saddexaad oo ay u oggolaato ay u hesho marin u helidda xogta shakhsiga ah, oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya, waxay ixtiraami doonaan oo ilaalin doonaan sirta iyo amniga xogta shakhsiga ah. Qof kasta oo ku hoos shaqeynaya awoodda soo dejiyaha xogta, oo ay ku jiraan soo saaraha xogta, waxaa waajib ku ah inuu ka shaqeyo xogta shaqsiyeed kaliya tilmaamaha ka imanaya soo dejiyaha xogta. Qodobkaan ma khuseeyo dadka loo idmaday ama looga baahan yahay sharciga ama qawaaniinta inay marin u yeeshaan xogta shakhsiga ah.
Ma jirto sabab lagu aamino, waqtiga la galayo qodobadan, jiritaanka sharci kasta oo maxalli ah oo saameyn weyn ku yeelan doona dammaanadaha lagu sheegay qodobadan, waxayna u sheegi doontaa dhoofiyaha xogta (kaas oo gudbin doona ogeysiinta noocaas ah ilaa hey'adda halka looga baahan yahay) haddii ay ogaato sharciyadaas oo kale.
Waxay ka baaraandegi doontaa xogta shakhsiga ah ujeeddooyinka lagu sharraxay Lifaaqa B, waxayna leedahay awood sharciyeed oo ay ku siin karto damaanad qaadyada ayna ku fulin karto ballanqaadyada ku xusan qodobadan.
Waxay u aqoonsan doontaa dhoofiyaha xogta barta xiriirka ee ururkeeda loo oggolaaday inay ka jawaabto su'aalaha la xiriira ka shaqeynta xogta shakhsiga ah, waxayna si daacadnimo leh ula shaqeyn doontaa dhoofiyaha xogta, mawduuca xogta iyo hay'adda ku saabsan dhammaan weydiimaha noocaas ah waqti macquul ah gudahood. . Haddii si sharci ah loo kala diro xogta dhoofiyaha, ama haddii ay dhinacyadu sidaas ku heshiiyeen, soo dejiyaha xogta ayaa qaadan doonta mas'uuliyadda u hoggaansanaanta qodobbada faqradda I (e).
Marka la codsado dhoofiyaha xogta, waxay siin doontaa xogta dhoofiyaha caddeyn ku saabsan ilaha dhaqaalaha ee ku filan si ay u gudato waajibaadkeeda ku xusan qodobka III (oo ay ku jiri karto caymiska caymiska).
Markaad si macquul ah u codsato dhoofiyaha xogta, waxay soo gudbin doontaa tas-hiilaadkeeda ka baaraandegidda xogta, feylasha xogta iyo dukumintiyada looga baahan yahay ka baaraandegidda dib u eegista, hubinta iyo / ama caddeynta dhoofiyaha xogta (ama wakiillada kormeerayaasha madaxbannaan ama eex la'aanta ah ama hanti dhowrka, ay soo xushay xogta) dhoofiyaha oo aan si macquul ah u diidin soo dejiyaha xogta) si loo hubiyo u hogaansanaanta damaanad qaadka iyo fulinta qodobadan, iyada oo ogeysiis macquul ah iyo saacadaha shaqada ee caadiga ah. Codsiga wuxuu ku xirnaan doonaa ogolaansho ama ogolaansho lagama maarmaan ah oo ka imanaya hay'ad maamusha ama kormeerid gudaha wadanka soo dejinta xogta, kaas oo ogolaanaya ama ogolaanaya soo dejiyaha xogta inuu isku dayi doono inuu ku helo qaab waqtigiisa ku habboon.
Waxay ku shaqeyn doontaa xogta shakhsiga ah, ikhtiyaarkeeda, iyadoo la raacayo mabaadi'da ka shaqeynta xogta ee ku xusan lifaaqa A.
Ma shaacin doono ama uma wareejin doono xogta shakhsiga ah qofka xukuma xogta dhinac saddexaad oo ku taal bannaanka Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA) ilaa ay ogeysiiso dhoofiyaha xogta ku saabsan wareejinta iyo
qofka xukuma xogta saddexaad wuxuu socodsiiyaa xogta shakhsiga ah iyadoo la raacayo go'aan ka soo baxa Guddiga oo sheegaya in waddan saddexaad uu bixiyo badbaado ku filan, ama
qofka xukuma xogta saddexaad wuxuu noqdaa mid saxeexa qodobadan ama heshiis kale oo wareejin xog ah oo ay ansaxisay hay'ad karti u leh EU, ama
maadooyinka xogta la siiyay fursad ay ku diidaan, ka dib markii lagu wargaliyo ujeedooyinka wareejinta, qaybaha dadka qaata iyo xaqiiqda ah in wadamada loo dhoofiyay xogta ay yeelan karaan heerar kala duwan oo ilaalin xogta ah, ama
marka la eego wareejinta xogta xasaasiga ah, maadooyinka xogta waxay bixiyeen ogolaanshahooda aan qarsooneyn ee wareejinta hore
III. XUQUUQDA MADAXDA IYO SADDEXAAD
Dhinac kasta wuxuu mas'uul ka noqonayaa dhinacyada kale waxyeelada uu u geysto jabinta qodobadan. Mas'uuliyadda inta udhaxeysa dhinacyada waxay ku egtahay waxyeelada dhabta ah ee soo gaadhay. Waxyeelooyinka ciqaabta (yacni magdhawga loogu talagalay in lagu ciqaabo dhinac falalkiisa foosha xun) ayaa si gaar ah looga reebay. Dhinac kasta wuxuu mas'uul ka noqon doonaa maadooyinka xogta wixii waxyeelo ah ee uu u geysto jabinta xuquuqda dhinac saddexaad ee qodobadan. Tani saameyn kuma yeelanayso mas'uuliyadda dhoofiyaha xogta ee hoos timaada sharcigeeda ilaalinta xogta.
Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen in mawduuca xogta uu xaq u leeyahay inuu dhaqan geliyo ka-faa'iideyste dhinac saddexaad ah qodobkan iyo qodobbada I (b), I (d), I (e), II (a), II (c), II (d ), II (e), II (h), II (i), III (a), V, VI (d) iyo VII oo ka dhan ah soo dejiyaha xogta ama dhoofiyaha xogta, jebintooda ku aadan waajibaadkooda qandaraas, marka loo eego xogtiisa shaqsiyeed, iyo inuu aqbalo xukunka ujeedkan ujeedada laga leeyahay wadanka dhoofinta xogta ee wadanka la aasaasay. Kiisaska ku lug leh eedeymaha ku saabsan jebinta xogta soo dejiyaha, mawduuca xogta waa inuu marka hore codsadaa dhoofiyaha xogta inuu qaado tallaabada ku habboon si uu u xoojiyo xuquuqdiisa ka dhanka ah soo dejiyaha xogta; haddii dhoofiyaha xogta uusan ku qaadin tallaabo noocan oo kale ah muddo macquul ah gudaheeda (taas oo xaaladaha caadiga ah ay ahaan doonaan hal bil), mawduuca xogguhu wuxuu markaa si toos ah u dhaqan gelin karaa xuquuqdiisa ka dhanka ah soo dejiyaha xogta. Mawduuca xogta wuxuu xaq u leeyahay inuu si toos ah uga hor tago dhoofiyaha xogta ee ku guuldareystay inuu adeegsado dadaal macquul ah si loo go'aamiyo in xogta soo dejiyaha ay awood u leedahay inay qanciso waajibaadkeeda sharci ee qodobadan hoos ku xusan (dhoofiyaha xogta waa inuu lahaadaa culeys si loo caddeeyo inay qaadatay dadaal macquul ah) ).
IV. SHARCIGA KU SAABSAN EEDAYNTA
Qodabadan waxaa xukumaya sharciga wadanka lagu dhisayo dhoofiyaha xogta, marka laga reebo sharciyada iyo qawaaniinta laxiriira ka shaqeynta xogta shakhsiga ee soo dejiyaha xogta sida ku xusan faqradda II (h), oo lagu dabaqi doono oo keliya haddii sidaas waxaa ku xushay soo dejiyaha xogta qodobkaas.
V. XALINTA KHILAAFYADA LAGU SAMEEYO MAGACYADA XOGTA AMA AWOODDA
Haddii ay dhacdo khilaaf ama sheegasho ay keensato mawduuc xog ama hay'ad ku saabsan ka baaraandegidda xogta shakhsiga ah ee labada dhinac ama labada dhinacba, dhinacyadu way is wargelin doonaan wixii khilaafaad ah ama sheegashooyin ah, waxayna la kaashan doonaan aragti inaad si deggan ugu dejiso qaab waqtiyaysan.
Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay ka jawaabaan hanaan dhexdhexaadin guud ahaan la heli karo oo aan qasab ahayn oo ay bilaabeen mawduuc xog ama hay'addu. Hadday ka qaybgalaan dacwadaha, dhinacyadu waxay dooran karaan inay sidaa ka fog sameeyaan (sida telefoon ama qaabab kale oo elektaroonig ah). Dhinacyadu sidoo kale waxay ku heshiiyeen inay tixgeliyaan kaqeybqaadashada wixii kale ee heshiisiin ah, dhexdhexaadin ah ama dacwadaha kale ee xallinta khilaafaadka ee loo sameeyay khilaafaadka ilaalinta xogta.
Dhinac kastaa waa inuu u hogaansamo go'aanka maxkamad awood u leh dalka dhoofinta xogta ee wadanka la aasaasay ama maamulka oo ah kan ugu dambeeya isla markaana aan wax racfaan ah oo dambe macquul aheyn.
Haddii ay dhacdo in soo dejiyaha xogta uu jebiyey waajibaadkiisa qodobadan, markaa dhoofiyaha xogta wuxuu si kumeelgaar ah u joojin karaa wareejinta xogta shakhsiga ah soo dejiyaha xogta ilaa jebinta la hagaajinayo ama heshiiska la joojinayo.
Haddii ay dhacdo:
wareejinta xogta shakhsiga ah soo dejiyaha xogta waxaa si kumeel gaar ah u hakiyay dhoofiyaha xogta in kabadan hal bil iyadoo la raacayo cutubka (a);
u hoggaansamida xogta soo dejisa qodobadan waxay ka dhigeysaa mid jabineysa waajibaadkeeda sharci ama sharciyeed ee dalka soo dejinta;
soo dejiyaha xogta wuxuu kujiraa jabinta wax ku oola ama damaanad qaad ah wixii damaanad ama fulin ah oo ay kubixisay qodobadan;
Go'aanka kama dambaysta ah ee aan racfaan dambe laga qaadan karin maxkamad awood u leh waddanka dhoofinta xogta ee waddanka la aasaasay ama sharciyada hay'adda in lagu xadgudbay qodobbada soo dejiyaha xogta ama dhoofiyaha xogta; ama
codsi ayaa loo soo bandhigayaa maamulka ama isku xirnaanta soo dejiyaha xogta, ha ahaato awood shaqsiyeed ama ganacsi, oo aan codsi lagu diidi karin muddada ku habboon ee cayrinta sida sharciga waafaqsan; amar dalaq ayaa la sameeyay; qaataha waxaa loo magacaabaa in ka badan hantidiisa; wakiilka musalafnimada ayaa la magacaabay, haddii soo dejiyaha xogta uu yahay shaqsi; shirkad abaabul iskaa wax u qabso ah ayaa lagu bilaabay iyada; ama dhacdo kasta oo u dhiganta oo ka jirta xukun kasta oo dhaca
ka dib xogta dhoofiyaha, iyadoo aan loo aabo yeelin xuquuq kale oo kale oo ay ku yeelan karto soo dejiyaha xogta, waxay xaq u lahaan doontaa inay joojiso qodobbadaas, haddii ay dhacdo loo sheego hay'adda halka looga baahan yahay. Kiisaska ay quseyso (i), (ii), ama (iv) ee ka sarreeya soo dejiyaha xogta sidoo kale way joojin karaan qodobadan.
Labada dhinac midkoodna wuu joojin karaa qodobadan haddii (i) Guddi kasta oo go'aan ku habboon oo ku habboon Qodobka 25 (6) ee Dardaaranka 95/46 / EC (ama qoraal kasta oo sarreysa) la soo saaro oo la xiriira waddanka (ama waaxdeeda) xogta waxaa wareejinaya oo ka baaraandegaya soo dejiyaha xogta, ama (ii) Dardaaranka 95/46 / EC (ama qoraal kasta oo sarreysa) wuxuu si toos ah uga dhaqan galayaa waddankaas.
Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen in joojinta qodobadan waqti kasta, xaalad kastoo jirta iyo sabab kasta ha noqotee (marka laga reebo joojinta qodobka VI (c)) kama dhaafayso iyaga waajibaadka iyo / ama xaaladaha ku xusan qodobbada marka laga hadlayo ka shaqeynta xogta shakhsiga ah ee la wareejiyay.
VII. KHUDBADDADA SHAQOOYINKAAN
Dhinacyadu ma beddeli karaan qodobadan marka laga reebo inay cusbooneysiiyaan wixii macluumaad ah ee ku lifaaqan B, haddii ay dhacdo ay u sheegaan maamulka meesha looga baahdo. Tani kama hor istaageyso dhinacyada inay ku daraan qodobo ganacsi oo dheeri ah meeshii loo baahdo.
VIII. Qeexida wareejinta
Faahfaahinta wareejinta iyo xogta shaqsiyeed waxaa lagu qeexay Lifaaqa B. Dhinacyadu waxay isku raaceen in Lifaaqa B ay ku jiri karaan macluumaad ganacsi oo qarsoodi ah oo aysan u soo bandhigi doonin dhinacyada saddexaad, marka laga reebo sida sharcigu u baahan yahay ama ka jawaab celinta sharciyeynta ama dowladda awoodda u leh. wakaaladda, ama sida loogu baahan yahay qodobka I (e). Dhinacyadu waxay fulin karaan lifaaqyo dheeri ah si loo daboolo wareejinta dheeraadka ah, oo loo gudbin doono hay'adda meeshii looga baahdo. Lifaaqa B waxaa laga yaabaa, beddelka, in loo qoro si loo daboolo wareejinta badan.
MABAADI'DA QAQAALAHA QAABKA XOGTA
1. Ujeeddo xaddidan: Xogta shakhsiga ah waa la farsameyn karaa oo markaa kadib ayaa loo isticmaali karaa ama loo sii gudbin karaa oo keliya ujeeddooyin lagu sharaxay lifaaqa B ama markii dambe loo oggolaaday mawduuca xogta.
2. Tayada xogta iyo u dhiganta: Xogta shakhsiga ah waa inay ahaataa mid sax ah oo, marka loo baahdo, la cusbooneysiiyaa. Xogta shaqsiyadeed waa inay ahaato mid kufilan, laxiriira oo aan xad dhaaf ahayn marka loo eego ujeeddooyinka loo wareejiyay ee loo sii waday.
3.Xurnaan: Mawduucyada xogta waa in la siiyaa macluumaad lagama maarmaan u ah si loo hubiyo in si caddaalad ah loo socodsiiyo (sida macluumaadka ku saabsan ujeedooyinka ka shaqeynta iyo ku saabsan wareejinta), illaa macluumaadkaas oo kale uusan horay u siin qofka dhoofiya xogta.
4. Amniga iyo qarsoodiga: Tallaabooyinka amniga iyo farsamada ee ururada waa in uu qaadaa ilaaliyaha xogta ee ku habboon halista, sida ka hortagga shilalka ama burburka sharci darrada ah ama luminta shilka, beddelaadda, shaacinta ama marin la'aanta aan la oggoleyn, ee ay soo bandhigeyso howsha. Qof kasta oo ku hoos shaqeynaya awoodda kormeeraha xogta, oo ay ku jiraan processor, waa inuusan ku shaqeyn karin xogta marka laga reebo tilmaamaha ka imanaya xakamaynta xogta.
5. Xuquuqda helitaanka, toosinta, tirtirka iyo diidmada: Sida ku xusan qodobka 12aad ee dardaaranka 95/46 / EC, maadooyinka xogta waa inay, ha ahaadaan si toos ah ama dhinac saddexaad, la siiyaa macluumaadka shaqsiyeed ee iyaga ku saabsan ee urur haya, marka laga reebo codsiyada si cad u xadgudub ah, oo salka ku haya xilliyada aan macquul ahayn ama tiradooda ama soo noqnoqoshada ama dabeecadda qaabaysan, ama marin u helka aan loo baahnayn in la siiyo iyadoo la raacayo sharciga waddanka dhoofiyaha xogta. Maadaama ay hay'addu ogolaansho hore bixisay, marin u heliddu sidoo kale lama siin doono marka ay sidaas samaynayso waxay u dhawdahay inay si daran u waxyeeleyso danaha soo dejiyaha xogta ama ururada kale ee la macaamilaya soo dejiyaha xogta isla markaana danaha noocaas ah kama badna danaha aasaasiga ah xuquuqda iyo xorriyadaha mawduuca xogta. Meelaha xogta shakhsiga ah looma baahna in la aqoonsado marka aysan taasi macquul ku ahayn dadaal macquul ah, ama halka lagu xadgudbayo xuquuqda dadka aan shaqsiga ahayn. Mawduucyada xogtu waa inay awoodaan inay lahaadaan macluumaadka shakhsiga ah ee iyaga ku saabsan in la saxo, wax laga beddelo, ama la tirtiro halka ay khaldan tahay ama looga shaqeynayo mabaadi'daas. Haddii ay jiraan sababo qasab ah oo shaki gelinaya sharcinimada codsiga, ururku wuxuu u baahan karaa caddeyn dheeraad ah ka hor inta uusan u dhaqaaqin sixitaanka, wax ka beddelka ama tirtirka. Ogeysiinta wixii sixid ah, wax ka beddelid ama tirtir ah ee dhinacyada saddexaad ee xogta loo gudbiyay looma baahna in la sameeyo marka tani ay ku lug leedahay dadaal aan dheellitirnayn. Mawduuca xogta sidoo kale waa inuu awood u yeesho inuu diido ka shaqeynta xogta shakhsiga ah ee la xiriirta isaga haddii ay jiraan sababo sharci ah oo qasab ah oo la xiriira xaaladdiisa gaarka ah. Culayska caddaynta wixii diidmo ah wuxuu saaran yahay soo dejiyaha xogta, mawduuca xogtuna wuxuu had iyo jeer la tartami karaa diidmada maamulka hortiisa.
6. Xog xasaasi ah: Soo dejiyaha xogta waa inuu qaadaa talaabooyin dheeri ah (tusaale ahaan amniga) sida loogu baahan yahay si loo ilaaliyo xogta xasaasiga ah sida waafaqsan waajibaadkeeda ku xusan faqradda II.
7. Xogta loo isticmaalay ujeeddooyin suuqgeyn: Meesha xogta looga shaqeynayo ujeeddooyinka suuqgeynta tooska ah, habab wax ku ool ah waa inay jiraan oo u oggolaanaya mawduuca xogta waqti kasta inuu “ka baxo” in xogtiisa loo isticmaalo ujeeddooyinkan oo kale.
8. Go'aanada otomaatiga ah: Ujeeddooyinka "go'aanka otomaatiga ah" waxaa loola jeedaa go'aanka dhoofiyaha xogta ama soo dejiyaha xogta ee soo saaraya saameyn sharci oo ku saabsan mawduuc xog ah ama si weyn u saameeya mawduuca xogta kaas oo ku saleysan oo keliya farsamaynta otomaatiga ah ee macluumaadka shakhsiyeed ee loogu talagalay si loo qiimeeyo dhinacyo shaqsiyeed oo isaga la xiriira, sida waxqabadkiisa shaqada, amaahda, kalsoonida, akhlaaqda, iwm. Soo dejiyaha xogta ma sameyn doono go'aano otomaatig ah oo ku saabsan maadooyinka xogta, marka laga reebo goorta:
(i) Go'aamada noocan oo kale ah waxaa sameeya soo dejiyaha xogta markay galayaan ama fulinayaan qandaraas la galayo mawduuca xogta, iyo
(ii) (mawduuca xogta waxaa la siiyaa fursad uu kagala hadlo natiijooyinka go'aan otomaatig ah oo khuseeya wakiilka dhinacyada go'aan ka gaaraya ama haddii kale wakiillo u sameeyo dhinacyadaas.
(b) halka kale ee uu bixiyay sharciga dhoofiyaha xogta.
Xogta shaqsiyeed ee la wareejiyay waxay khuseysaa qaybaha soo socda ee maadooyinka xogta:
Ujeedooyinka wareejinta (yada)
Wareejinta waxaa loo sameeyay ujeedooyinka soo socda:
Siinta Adeegga Zeevou ee dhoofiyaha xogta ee soo dejiyaha xogta.
Xogta shaqsiyeed ee la wareejiyay waxay khuseysaa qaybaha xogta ee soo socda:
Macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed (magaca, cinwaanka iimaylka, lambarka taleefanka, cinwaanka guriga, jinsiga, taariikhda dhalashada, iwm.)
Dukumintiga Aqoonsiga ee Dawladdu soo saartay
Saxeexa Elektarooniga ah
Lambarka diiwaangelinta baabuurta (halka baabuurta la dhigto)
Macluumaadka ku saabsan shuruudaha hoygaaga sida miisaaniyadda, muddada joogitaanka iyo nooca hoyga
Macluumaadka la socoshada ayaa loogu gudbiyay Zeevou iyadoo loo marayo la-hawlgalayaasha xayeysiinta ama la-hawlgalayaasha tixraaca
Macluumaadka gorfaynta ku saabsan adeegsiga Adeegga iyo isdhexgalka Adeegga dhexdiisa
Xogta shaqsiyadeed ee la wareejiyay waxaa loo sheegi karaa oo keliya kuwa soo socda ama qaybaha dadka qaata:
Xogta xasaasiga ah
Xogta shaqsiyeed ee la wareejiyay waxay khuseysaa qaybaha soo socda ee xogta xasaasiga ah:
Macluumaadka diiwaangelinta ilaalinta xogta dhoofiyaha xogta
Macluumaad dheeri ah oo waxtar leh (xadka u keydinta iyo macluumaadka kale ee khuseeya)
Markay Joojiso Heshiiska, Zeevou waxay xaq u leedahay inay hayso nuqul ka mid ah wixii xog ah ee ay u dhiibtay Adeegga Zeevou Macaamilku si aan xad lahayn. Iyada oo ku xidhan Macaamiisha markay la kulantay dhammaan waajibaadkii ka saarnaa Heshiiska, Zeevou waa inay caawimaad siisaa Macaamilka dhoofinta xogtooda ama u wareejineysaa bixiye kale iyada oo lagu beddelayo lacag dheeraad ah, taas oo ku xirnaan doonta xaddiga shaqada ku lug leh bixinta macluumaadka lagama maarmaanka ah . Kaalmadan waxaa la heli doonaa ilaa 30 maalmood laga bilaabo Taariikhda Joojinta.